ရွှေမန်းသူလေး… – Grab Love Story
ကျနော် တနင်္ဂနွေနေ့ စလုံးက ပြန်ရောက်ပြီး နောက်တစ်နေ့မှာပဲ ဇာတ်လမ်းက စတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ကျနော်ပြန်ရောက်ရင် လုပ်နေကြ ထုံးစံအတိုင်း ရန်ကုန်မြို့ထဲ လေ့လာရန် ဆိုပြီး မနက်က အိမ်ကနေ စောစောထွက်လာခဲ့တယ်။ အမေက အိမ်က ကားကို ယူသွားဖို့ ပြောတာတောင် ကျနော် ယူမလာခဲ့ဘူး။ ရောက်ခါစဆိုတော့ ကားပြန်မမောင်းရဲသေးတာက တစ်ကြောင်း။ ကားမောင်းရင် ကိုယ်ကြည့်ချင်တာတွေ ကြည့်လို့မရတော့မှာ ဆိုတာက တစ်ကြောင်းပေါ့။ အဲဒါနဲ့ လိုင်ကားနဲ့ပဲ ဆူးလေကို ထွက်လာခဲ့တာ။ အိမ်က ထွက်မလာခင်တော့ အမေ့ကို မေးခဲ့ရသေးတယ်။ ဘာကားစီးသွားရင် ကောင်းမလဲလို့လေ။ အမေက ပြောတယ် ”ပါရမီ အထူးပဲ စီးသွား ..အဲဒါက မြို့ကို ပတ်နေတာဆိုတော့ သားတစ်ခါထဲ နေရာစုံရောက်တာပေါ့တဲ့ ”။ အမေ့ စကားဆိုတာ မပယ်ရှားကောင်းဘူး မှတ်လား။ ကျနော်လဲ ကားမှတ်တိုင်မှာ ပါရမီ အထူးကိုပဲ စောင့်စီးခဲ့တယ်။
အမယ် …ကြားဖြတ်ပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံကြီးများ တယ်တိုးတက်နေပါလား။ ကားမှတ်တိုင်တောင် ကျကျနနဆောက်ထားတဲ့ သံဖရိန် အမိုးကာ အဆောက်အဦးလေး ဖြစ်နေတယ်။ ထိုင်ခုံလေးတွေက အစီအရီနဲ့။ ကွမ်းတံတွေးနဲ့ အမှိုက်ထည့်ရန် ဆိုတဲ့ အမှိုက်ပုံးကလဲ အသင့်ဗျ။ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ အမှိုက်ပုံးမှာ အမှိုက်တွေ ပြည့်နေတာတောင် မသိမ်းသေးတာရယ်။ ရှိတဲ့ ထိုင်ခုံလေး လေးငါးလုံးမှာ နှစ်လုံးကို ဂျာနယ်ရောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးက နေရာဦးထားတာက လွဲရင်ပေါ့လေ။ ချိုင့်တွေ ခွက်တွေ အပြည့်နဲ့ ကတ္တရာလမ်းကိုတော့ ထည့်မပြောတော့ပါဘူး… အ ဟီး။
ကျနော်လဲ ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို လေ့လာနေတာပေါ့လေ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ပါရမီကားက ဆိုက်လာတယ်။ ကားပေါ်မတက်ခင် ဆူးလေသွားတာ ဟုတ်လား မဟုတ်လား ကြည့်လိုက်တော့ ကားရှေ့မှန်အပေါ်မှာ ipay ဆိုပြီး ရေးထားတာ သွားတွေ့တယ်။ သြော် .. ဒါ အမေပြောတဲ့ ကားကို ကတ်နဲ့ စီးရတဲ့ စနစ်ပဲကိုး ဆိုပြီး သဘောကျသွားတယ်။ ကျနော်က ကတ်မရှိတော့ ပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ပဲ စီးရတော့မှာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ စပယ်ယာကို ပိုက်ဆံပေးမယ်လုပ်တော့ ကိုယ့်ရှေ့က တက်သွားတဲ့ ကောင်မလေးက စပယ်ယာကို ကတ်လေးတစ်ခု ပေးလိုက်တာ တွေ့တယ်။ စကတ်ထမိန်ဝတ်ထားတဲ့ ကောင်မလေးက ကိုယ်လုံးတောင့်တောင့်လေး ဖြစ်နေတာရယ် စပ်စုချင်တာရယ်နဲ့ အထဲကို တိုးမဝင်သေးပဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ ရပ်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ဟိုက် .. စပယ်ယာရဲ့ လည်ပင်းမှာ စက်ကလေးတစ်လုံး ဆွဲထားတယ်ဟ။ ကြည့်လိုက်တော့ ကင်မရာလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့။ ခုနက ကောင်မလေးပေးလိုက်တဲ့ ကတ်ကို စက်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူက ကောင်မလေးကို ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ အင် .. သူ့ဟာက ဒီလိုကြီးလား။ တော်သေးတယ်။ စပယ်ယာက သူ့ဖာသူ လုပ်ပေလို့ပေါ့။ ဒီပြင်သာဆို အစောက ကောင်မလေးက စပယ်ယာနားကပ်သွားပြီး ရင်ပတ်ကစက်ကို ကတ်နဲ့ထိပွတ်ဆွဲရမှာ။ ခွိ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကတ်နဲ့သုံးလို့ရတာကိုက အဆင့်မြင့်လာတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့နော် .. ;D ။ ကျနော်လဲ ကျသင့်ငွေကို ပေးလိုက်ပြီး အစွန်က ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ပြီး လိုက်လာခဲ့တယ်။ ဟိုကြည့် ဒီကြည့်ပေါ့။ ဆူးလေ ရောက်တော့ ဆင်းပြီး ဟိုငေး ဒီငေးနဲ့ လျှောက်သွားမိတယ်ပေါ့လေ။
အဲဒါနဲ့ပဲ အချိန် နှစ်နာရီလောက် ကြာတော့ လမ်းလျှောက်ရတာ ခြေထောက်ညောင်းတာနဲ့ အိမ်ပဲ ပြန်လာခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ပါရမီ မစီးနိုင်တော့ဘူး။ ဗိုက်ထဲက တကျုတ်ကျုတ်မြည်နေတာရော၊ အမေ့လက်ရာလေး စားချင်တာကြောင့်ရော တက်စီပဲ ငှားစီးလာခဲ့တယ်။ အံမယ်။ တက်စီ စီးလာရင်းနဲ့မှ စဉ်းစားမိသေးတယ်။ တက်စီကလဲ ငါ့နဲ့ တော်တော်လိုက်တယ်လို့။ ဘာတဲ့ နာမည်ကိုက ကျူကျူဆိုပါလား။ အ ဟီး။
အဲ .. အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အမေက အပေါက်ဝက ဆီးစောင့်နေတာ တွေ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ ဘာဟင်းချက်လဲလို့ မေးမယ် ပြင်တုန်းရှိသေး အမေက ..
“သား ပြန်လာတာ အတော်ပဲ .. အခုပဲ ဒေါ်ယဉ်ယဉ် ဖုန်းဆက်တယ် …“
အမေ့ မျက်နှာရိပ် မျက်နှာကဲအပြင် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဆိုတဲ့ နာမည်ကြောင့် ကျနော် ကိစ္စတစ်ခုတော့ ရှိပြီဆိုတာ ရိပ်မိတယ်။
“ဘာလဲ .. အမေ .. ဘာကိစ္စဖြစ်လို့လဲ …“
“အေး .. ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ကပြောတယ် … အမေတို့ တတ်နိုင်ရင် ညနေ လာခဲ့ပါလားတဲ့ .. သူတို့က အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာ ခရီးထွက်ရမယ် ပြောနေလို့ ..“
“အမ် .. ဟုတ်လား အမေ .. ဒီနေ့ ညနေဆိုတော့ ..“
“ဟုတ်တယ် … သား .. အမေလဲ အဲဒါကိုပဲ ပြောမလို့ .. ဒေါ်ယဉ်ယဉ်တို့ကလဲ အားနာနေတာ .. ဟိုဘက်က အလုပ်ကိစ္စကလဲ တော်တော် အရေးကြီးနေလို့ပါတဲ့ …“
“အင်းလေ … ဒါဆိုတော့လဲ သွားကြတာပေါ့ အမေရယ် .. အခုတော့ ထမင်းစားကြတာပေါ့ ..“
“ရတယ်လေ .. သား .. ထမင်းပွဲက အဆင်သင့်ပဲ .. အဲဒီကိစ္စကို ပြောချင်လို့ .. နောက်ပြီး ကားလက်မှတ်ရဖို့က ရှိသေးတယ် မှတ်လား ..“
အမေပြောမှ ကျနော်လဲ ဘာဖြစ်လို့ အမေက အပေါက်ဝကနေ ဒီစကားကို ဆီးပြောရတာလဲဆိုတာ သဘောပေါက်တယ်။
“အာ .. အမေကလဲ .. ရန်ကုန် မန္တလေးများ ကားတွေက ပေါလို့ … စိတ်ပူမနေနဲ့ … ကျနော်ပိုင်ပါတယ် …“
အမေလဲ ကျနော့်ရဲ့ ရဲရဲကြီး အာမခံ စကားကြားတော့ ဘာမှ ထပ်မပြောတော့ပဲ နောက်ဘေးဘက် တန်းဝင်သွားတယ်။ ကျနော်လဲ စာပေလောကကဝယ်လာတဲ့ နေဝင်းမြင့်ရဲ စာအုပ်ကို စားပွဲပေါ်တင်ရင်း ထမင်းစားခန်းထဲ တန်းဝင်လာခဲ့တယ်။ ကျနော်လဲ ထမင်းစားခန်း အဖြတ် အဖေက အိမ်ပေါ်ထပ်ကနေ ဆင်းလာတာနဲ့ဆုံတယ်။ “အဖေ ထမင်းစားမှာလား“ ဆိုပြီး လှမ်းခေါ်တော့ “အေး … စားတာပေါ့“ လို့ ဆိုလို့ မိသားစု ထမင်းလက်ဆုံ စားဖြစ်ကြသေးတယ်။ ဝက်သားနှီချက်လေးကို သရက်ချဉ်သုပ်လေးနဲ့။ အံမယ် ပဲကြီးဟင်းကို ဆူးပုပ်ရွက်ခပ်ထားတာတောင် ပါသေး။ ငါးပိရည်ချက်နဲ့ တို့စရာကတော့ ထည့်မပြောတော့ပါဘူး။ ကောင်းမှ ကောင်းပေါ့ ……. 😀
ထမင်းစားပြီးတော့ အမေ့ကို ကတိပေးခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အိမ်ကဖုန်းကို ဆွဲပြီး ဝရံတာကို တက်လာခဲ့တယ်။ နှစ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲ ပြောင်းလဲ တယ်လီဖုန်း လိုင်းမမိတာက မပြောင်းလဲသေးတာမို့ လိုင်းမိတဲ့နေရာက ပြောရမယ်လေ။ ဝရံတာရောက်တော့ အသင့်ရှိတဲ့ ပက်လက်ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ရင်း ဖုန်းစာအုပ်ထဲက မနဲ့စတဲ့ နာမည် (အမ်နဲ့စတာပါ) ကို ရှာလိုက်တယ်။ ကျနော် ရှာနေတဲ့ နာမည်တွေ့တာတောင် နာမည်တူက နှစ်ခု ဖြစ်နေလို့ နောက်က Travel Agent ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့မှ ခလုတ်နှိပ်လိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ရန်ကုန်မြို့တွင်း အချင်းချင်းခေါ်တာတောင် လိုင်းက ချက်ချင်းမဝင်ပဲ ဆယ်စက္ကန့်လောက်ကြာမှ လိုင်းဝင်သွားတယ်။
“ဟယ်လို .. မီးမီးနဲ့ ပြောချင်လို့ပါ …“
လာထူးတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အသံကြားတာနဲ့ ကျနော်တွေ့ချင်တဲ့သူကို ပြောလိုက်ရတယ်။ ဆိုင်က ဖုန်းမှန်းသိနေလို့ ကျနော်တွေ့ချင်သူ ဟုတ်တယ် မဟုတ်တယ်ဆိုတာ သေချာမသိတာကြောင့်ပါ။ တစ်ဖက်က အသံက ခနငြိမ်သွားပြီမှ ..
“အယ် .. အကို ဘယ်တုန်းက ပြန်ရောက်နေတာလဲ …“
ဒီတစ်ခါတော့ ဘယ်သူဆိုတာ ကျနော် သေချာသိသွားပြီ။ ပြန်မေးတဲ့ပုံစံနဲ့ ချိုမြတဲ့ အသံကြောင့် ဒါဘယ်သူဆိုတာ ထပ်မေးနေစရာ မလိုတော့ဘူး။
“ဟုတ်တယ် မီးမီး … မနေ့က ပြန်ရောက်တာ …“
“ဟုတ်လား … အကို ဟိုမှာ တော်တော်ကြာတယ်နော် …“
“အေး … ကြာတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့ …“
“အ ဟင်း .. အ ဟင်း …. အော် .. ဒါနဲ့ အကို မီးမီး ဆီဆက်တာ …“
“ဟဲ့ .. နင့်ဆီဆက်မှတော့ ကားလက်မှတ်လိုချင်လို့ပေါ့ … ဒါ နင့်ဆိုင်ဖုန်းပဲ မဟုတ်လား …“
“ပြော .. အကို .. ဘယ်ကိုလဲ .. မန္တလေးကိုပဲလား ..“
“ဟုတ်တယ် .. မန္တလေးကိုပဲ .. ဒီနေ့ညနေ …“
“ဟင်.. အကိုကတော့ လုပ်ပြီ … ညနေ သွားမှာကို အခုမှ ဝယ်ရလား … ဒါနဲ့ ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ .. အကိုတစ်ယောက်တည်းလား ..“
“ဟုတ်ဘူးဟ .. အားလုံးပေါင်း သုံးယောက် .. အဖေရော အမေရောပါမှာ …“
“အယ် .. ဒုက္ခပဲ … နေဦး .. အကို …“
တစ်ဖက်က စကားပြောသံ ငြိမ်သွားပြီး သူတို့အချင်းချင်း လှမ်းပြောသံတွေကို တိုးတိုးလေး ကြားနေရတယ်။ အမတွေရော ညီမတွေရော ရှုပ်နေတာပဲ။ ခနနေတော့မှ ..
“အကို .. ရိုးရိုး express ကားပဲ ရတယ် … ဖြစ်တယ်မှတ်လား …“
“အာ .. ရပါတယ် … နင်ကလဲ … expressက ရိုးရိုးမဟုတ်ပဲ ဆန်းတာတွေ ရှိသေးလို့လား ..“
“အံမယ် .. အကိုနော် .. မြန်မာနိုင်ငံများ အထင်သေးလို့ .. ဒီမှာ Scania တောင် စီးနေကြပြီ …“
“ဟေ .. ဟုတ်လား …“
ကျနော် နဲနဲ အသံကျယ်သွားသလို မျက်လုံးလဲ ပြူးသွားတယ်။
“မီးမီး .. အဲဒါက မရတော့ဘူးလား … ရရင် စီးချင်တယ် ဟယ် …“
“အကိုကလဲ .. အခုကျမှတော့ ဘယ်ရတော့မလဲ .. မန္တလေးက အပြန်ကျမှ စီးလာခဲ့တော့ … ဒါနဲ့လက်မှတ်က အကို လာယူမှာလား …“
“အေး အေး .. လာယူမယ်လေ … နင် ဘယ်အချိန်အားလဲ …“
“ဘယ်အချိန်အားလဲ ဆိုလျှင်တော့ အလုပ်ဆင်းမှ အားမှာပဲ.. အကိုကမှ ကြိုမပြောတာ ..“
နောက်ဆုံးစကားတွင် လိုင်းမကောင်းလို့ပဲလား ကျနော်ပဲ နားကလေးသွားလို့လား မသိ။ မီးမီး အသံက နဲနဲတိုးသွားတယ်လို့ ထင်ရတယ်။ မီးမီးဆိုတာကလဲ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်ရဲ့ ဂျီတီစီမှ ညီမလေးများစွာထဲက တစ်ယောက်ဆိုတော့ အချိန်ရရင်တော့ တွေ့ချင်ပါသေးတယ်။ သို့သော်လဲ …
“အေး .. ဒါဆိုလဲ အကို အခုပဲ လာယူလိုက်မယ် …နင် မအားရင်လဲ မန္တလေးက ပြန်ရောက်မှ တွေ့ကြတာပေါ့ …“
“ဟုတ် .. ဒါဆို ဒါပဲနော် … အကို … ဒီမှာ ဖုန်းတွေ မြည်နေလို့ ..“
ကျနော် အားနာသွားတယ်။ မီးမီးတို့ ခရီးသွား အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းက နာမည်ကြီးမို့ အလုပ်များတယ်ဆိုတာ ကျနော် သိနေတယ်လေ။ တခါ သွားတွေ့တုန်းကဆို သူမမှာ ဖုန်းနှစ်လုံးကိုတောင် ဘယ်ညာကိုင်ပြီး ပြောနေတာလေ။
“အေး .. အေး .. ဆောရီး .. မီးမီး .. နောက်မှပဲ …“
ကျနော် ဖုန်းပြောပြီး အောက်ပြန်ဆင်းလာတော့ အမေ့ကို ဧည့်ခန်းထဲမှာ ပစ္စည်းတွေ ထည့်နေတာ တွေ့တယ်။ ကိုရီးယားစောင်တစ်ထည်ကို ခေါက်နေရင်းက ..
“သား .. ဘယ်လိုလဲ .. ကားလက်မှတ်ရလား …“
“အာ … အမေကလဲ ပိုင်ပါတယ် .. ဆိုမှ …“
ကျနော့် စကားကြားတော့ အမေက ပြုံးတယ်။ ကိုယ့်သားအကြောင်း သိနေသူမို့ ဆက်မမေးတော့ပဲ စောင်ကိုပဲ ဆက်ခေါက်နေတယ်။ ကျနော့်မှာ ဆက်မေးရင် လေကန်မယ်ပြင်ပြီးမှ အမေက သူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်နေလို့ အတော်ကသိကအောင့် ဖြစ်သွားတယ်။ အမေတွေများ အခက်သား။ သားဖြစ်သူ ပြောတာတောင် နားမထောင်ချင်ဘူး။ ဒါတောင် ဟို ယူစက်မှာ ရှိနေတဲ့ မွေးစား အမေမပါသေးဘူး။ သူလဲ အတူတူပါပဲ …. အ ဟီး 😀
အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးကားဝင်းဟာ ရွှေအိုရောင် ညနေခင်းရဲ့ အရိပ်တွေထဲမှာ အလွန်တရာ စည်းကားနေပါတယ်။ ရွှေမန္တလာအဆင့်မြင့် ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီး ချိတ်ထားတဲ့ ခရီးသွား နားခိုဆောင်မှာ ထိုင်ရင်း ဟိုဟိုဒီဒီ ငေးမေနေမိတယ်။ သြော် … ရွှေ့မန္တလာတောင် တော်တော် အောင်မြင်သွားပါလား။ ဟုတ်တယ်။ ကျနော်တို့ အရင်တုန်းကဆို ရန်ကုန်မန္တလေး express ကားဟာ မြတ်မန္တလာထွန်းလောက်ပဲ သိတာ။ အခုကျတော့ ရွှေမန္တလာ၊ မန္တလာမေ၊ နယူးမန္တလာထွန်း အစရှိသဖြင့် စုံလင်နေပြီလေ။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲ မီးမီးပြောတဲ့ Scania ကားတစ်စီး ထွက်သွားတာတွေ့လို့ ကျနော်က အမေ့ကို လက်ကုတ်ပြီး လှမ်းပြောမိတယ် …
“မေမေ .. အဲဒါက ဆွီဒင်က ထုတ်တာလေ … အခု ရန်ကုန် မန္တလေး ဆွဲနေပြီသိလား …“
အမေက ဘာမှ ပြန်မပြော။ သူသိပါတယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ပြုံးပြီး ခေါင်းပဲညိမ့်ပြတယ်။ ကျနော့် စကားကြားသွားလို့ထင်တယ်။ အမေ့ဘေးက ထိုင်နေတဲ့ အဖေက ကိုယ်ကိုကျော်ကြည့်ပြီး ..
“မင်း .. ဘာမှ လျှောက်ပြောမနေနဲ့ .. ပြောတော့ ပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး .. ခုံလေး သုံးခုံတောင် တဆက်တည်း မရဘူး …“
ဟင်… အဖေ့စကားကြောင့် ကျနော်နဲနဲ နင်သွားတယ်။ ဘိုးတော်များ သားဖြစ်သူကို ဘယ်အချိန်ကတည်းက နှိပ်ကွပ်ဖို့ ချောင်းနေလဲ မသိဘူး။ အထွန့်တက်တတ်တဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ပြန်ပြောမယ်ပြင်တုန်း ရှိသေး။ ရွှေမန္တလာ 8th Bus နဲ့ မန္တလေးသို့ လိုက်မယ့်သူများ နေရာ ယူနိုင်ပါပြီဆိုပြီး ကြေညာတဲ့ အသံကြားလိုက်ရတယ်။ ကျနော်လဲ ယောက်ျားကြီး တန်မဲ့ အဖေ့ကို မျက်စောင်းပဲ ထိုးနိုင်ပြီး ကားပေါ်တက်ဖို့ ထိုင်နေရာက ထလိုက်တယ်။
ကားပေါ်တက်လိုက်ရင် တက်လိုက်ချင်းပဲ အေးမြတဲ့ အဲယာကွန်းလေက စောင့်ကြိုနေတယ်။ တော်သေးတယ်။ ကျနော်က အအေးကြိုက်တတ်တဲ့သူမို့။ အမေကတော့ အဖေနဲ့ အတူ ၇ ၈ မှာ ဝင်ထိုင်ပြီးပြီးချင်းပဲ အနွေးထည်လေး ထုတ်ဝတ်တာတွေ့တယ်။ ကျနော်လဲ အမေနဲ့ အဖေ့ အဝတ်အိတ်ကို အပေါ်တင်ပေးခဲ့ပြီး။ ကျနော့်ရဲ့ခုံနံပါတ် ၂၆ ဆီ လျှောက်လာခဲ့တယ်။ အဖေ ပြောလဲပြောချင်စရာပဲ။ လက်မှတ်ဝယ်တဲ့ အချိန်က နောက်ကျနေတော့ ခုံနပါတ်တွေက တခြားစီ ဖြစ်နေတယ်လေ။
ခုံနံပါတ် ၂၆ ရောက်တော့ ဘေးက ဘယ်သူလဲ ကြည့်လိုက်တယ်။ ခုံက အလွတ်ဖြစ်နေတာ တွေ့တော့ နဲနဲတောင် ပျော်သွားတယ်။ မိုက်လှချည်လား။ ငါတစ်ယောက်တည်း စီးရတော့မှာပေါ့ဆိုပြီး တွေးလိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ကလူနဲ့ ဘေးကလူတွေကို ကြည့်တော့ လူ့အပြည့် ဖြစ်နေတာ တွေ့တယ်။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မလာသေးတာနေမှာပေါ့ဆိုပြီး စဉ်းစားရင်း ကျနော့် လက်ဆွဲအိတ်ကို အပေါ်ကစင်ပေါ်ထိုးတင်ပြီး ကိုယ့်ခုံမှာပဲ ဝင်ထိုင်နေလိုက်တယ်။ လမ်းဟိုဘက်က ခုံမှတော့ ဘွားတော်တစ်ယောက်နဲ့ ချာတိတ်တစ်ကောင် ထိုင်နေတယ်။ အသက်ကြီးကြီး မြန်မာအမျိုးသမီးကြီးတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဆိုက်ကြီးကြီးမို့ ချာတိတ်တောင် ချောင်ကပ်ထိုင်နေရတာ တွေ့တယ်။ ဘုရား .. ဘုရား .. ငါ့ဘေးနား လာမယ့်သူက ဒါမျိုးကြီး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဟုတ်တယ်လေ။ ပြောရရင် ဒေါ်လေးဆိုတာတွေကို ကျနော်က ဟိုနှစ်ယောက်လောက် မကြိုက်ဘူးလေ။ အဟီး။ အလကား အဖွားကြီးတွေ .. ခွိ 😀
ဝင်ထိုင်ပြီး တော်တော်ကြာတဲ့ အထိ ကျနော့်ရဲ့ ခရီးဖော်က ရောက်မလာသေးဘူး။ အင်း။ နောက်ပဲကျတာလား။ မလာပဲ မလာတော့တာ့လား။ ဒါမှမဟုတ် လမ်းကပဲ တက်မှာလား မသိဘူး။ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပေးတုန်းကလဲ အမေက ပေးလိုက်တာဆိုတော့ ကိုယ့်ဘေးကလူ ဘယ်သူလဲဆိုတာတောင် ကျနော် မသိလိုက်ဘူး။ ဘာရယ် မဟုတ်ပေမယ့် တစ်ညလုံး ဘေးနားမှာ ရှိနေမယ့်သူ တစ်ယောက်မို့ စိတ်ဝင်စားမိတဲ့ သဘောပါ။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူမကို ကျနော် မြင်လိုက်တာပါ။ မြင်မြင်ချင်းပဲ စိတ်ဝင်စားမိတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ တကယ်လဲ သူမက ကျနော် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှအောင် မိုက်နေတယ်လေ။ မြန်မာဝတ်စုံလို့ ပြောရင်ရမယ့် ခရမ်းရောင် ရင်ပုံးနဲ့ ထမိန်ကို ဝတ်ထားတဲ့ သူမဟာ တစ်ယောက်ထဲ ကားပေါ်ကို အခုမှ တက်လာတဲ့ အတွက် ထင်းထင်းရှင်းရှင်း ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော် စိတ်ဝင်စားမိတာက မိန်းမလှလေးဖြစ်နေတာထက် သူမရဲ့ အသွင်အပြင်ကြောင့်လို့ ပြောရမှာ။
ကြည့်လေ။ သူမက ခရမ်းရောင် ဇာခေါင်းစည်းပုဝါလေးကို ခေါင်းမှာ ချည်နှောင်ထားပြီး နေကာမျက်မှန်အဝိုင်းတစ်လက်ကို နဖူးပေါ်က ဆံနွေတွေကြားမှာ ဒီအတိုင်းထိုးတင်ထားတယ်။ ခရမ်းရောင် မင်းသမီးလေးပေါ့။ နေကာမျက်မှန်က တပ်ထားတာ မဟုတ်ပဲ ဒီအတိုင်းခေါင်းမှာ ထိုးထားတာ ဖြစ်လို့ မျက်နှာဖူးဖူးလှလှလေးက အရှင်းသားပေါ်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူမက ကားနောက်ဘက် လျှောက်လာလို့ ကျနော် အကြည့်ကို မျက်နှာကနေ အောက်ဘက်ကို နဲနဲဆင်းလိုက်တယ်။ ခရမ်းရောင် ရင်ပုံးအင်္ကျီဟာ လက်စကလေးနဲ့ ဖြစ်ပြီး လက်မောင်းကနေ တောက်လျှောက်က ဇာပါးလေးသာ ဖြစ်နေတယ်။ အဲ .. လမ်းလျှောက်မှ သတိထားမိတာ။ သူမဝတ်ထားတာ ရိုးရိုးထမိန်မဟုတ်ပဲ ထမိန်စကတ်ပါလား။ ခြေအကြွမှ ဝင်းခနဲ ဖြစ်သွားတဲ့ ခြေသလုံးသားလေး ပေါ်သွားလို့ အကွဲလေးနဲ့ပဲလို့ တွေးလိုက်သေးတယ်။
ကျန်တဲ့သူတွေ ထိုင်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူမတစ်ယောက်တည်းက မတ်တပ်မို့ အားလုံးသော ခရီးသည်တွေရဲ့မျက်လုံးက သူမအပေါ်ရောက်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမကတော့ ခပ်တည်တည်ပါပဲ။ ကျနော် သူမကို ကြည့်နေရင်းနဲ့ တစ်ယောက်သောသူကို သွားမြင်ယောင်တယ်။ ဒီကောင်မလေး ပုံစံကြည့်ရတာ ဝင်ဦးရဲ့ မောင်တို့ချယ်ရီမြေထဲက ခင်သန်းနု ဒီဇိုင်းပါလားလို့။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ရော ဝတ်ပုံစားပုံရောက ခင်သန်းနု သင်္ကြန်မှာ ရုပ်ဖျက်ပြီး ရေပက်ခံထွက်တုန်းက ပုံစံနဲ့ သွားဆင်နေတယ်။
အဲ.. ကျနော့်နားရောက်တော့ လမ်းလျှောက်တာရပ်သွားတယ်။ ဗုဒ္ဒေါ .. ငါ့ရဲ့နံပါတ် ၂၅များလား။ ကျနော်ထင်တာ မလွဲပါဘူး။ “နဲနဲလောက်“ ဆိုတဲ့ ခပ်တည်တည်နဲ့ စကားသံလေး အဆုံးမှာ ကျနော် ထပြီးတော့ လမ်းဖယ်ပေးလိုက်တယ်။ ရှေ့ကလူက ခုံကို နဲနဲ နောက်လှန်ထားလို့ သူမဝင်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ခြေထောက်က တော်တော်ယို့လိုက်ရတယ်ထင်တယ်။ ခြေသလုံးသား ဝင်းဝင်းလေးတွေ တော်တော်ပေါ်သွားတယ်။ နောက်ပြီး ကွက်တိချုပ်ထားတဲ့ ထမိန်စကတ်ကြောင့် တင်သားပြည်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးလေးတွေတောင် ဖောင်းထလာသလိုပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ နောက်ဘက်ကနေ “အဟွတ် အဟွတ်“ ဆိုပြီး ချောင်းဆိုသံကြားလို့ ကျနော် မလုံမလဲနဲ့ မျက်နှာလွှဲလိုက်ရတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ အလယ်လမ်းဟိုဘက် နှစ်ခုံကျော်က ကုလားဒိန်ဆီက ဖြစ်နေတယ်။ စိတ်ထဲက နဲနဲဘုသွားပြီး ကျိတ်ကျိန်ဆဲလိုက်သေးတယ်။ ခွေးမသား ကုလားပေါ့။ မြန်မာပြည်လာပြီး တော်တော် ရောင့်တက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့… ။
ကျနော် ပြန်ဝင်ထိုင်ပြီးပြီးချင်းပဲ ကားက စထွက်ပါတယ်။ အစောက မေတ္တာသုတ် ဗောဇင်သုတ်တွေ ဘာတွေ ထည့်ထားတဲ့ ခွေလဲရပ်သွားပြီး သူတို့ နောက်ထပ် အခွေတစ်ခွေထည့်တယ်။ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ လေးဖြူရဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တဲ့။ ကျနော်လဲ အဲဒါနဲ့ အင်္ကျီအိတ်ထဲက အိုင်ဖုန်းကို ထုတ်မနေတော့ပဲ တီဗီကိုသာ လှမ်းကြည့်နေလိုက်တယ်။ မျက်စိစောင်းပြီး ဘေးနားကို ကြည့်တော့ ကျနော့်ရဲ့ ခင်သန်းနုလေးက အပြင်ကို ငေးနေတာတွေ့တယ်။ လိုက်ပို့တဲ့သူကိုများ နှုတ်ဆက်တာလားလို့ ရောယောင်ပြီး ငေးကြည့်တော့ ဘယ်သူမှ မတွေ့ပါဘူး။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ကျနော် အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှူရှူပြီး သာသာလေး မှုတ်ထုတ်မိတယ်။ ငါ့နှယ်နော် ….
မှန်ဘက်ကို ကပ်ပြီး လမ်းမကို ငေးနေလို့ ကျနော့်ရဲ့ ခင်သန်းနုလေးကို အားမနာတမ်း ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ဆံပင်လေးတွေကို ခေါင်းစည်းပုဝါနဲ့ သိုင်းဆီးထားလို့ လည်ဂုတ်သားဝင်းဝင်းလေးတွေက နဲနဲပေါ်နေတယ်။ ကောင်မလေးက မဖြူပါဘူး။ ညိုတယ်လို့လဲ ပြောလို့မရဘူး။ ဝါဝါဝင်းဝင်းလေးလို့ ပြောရင် ပိုမှန်မယ်။ အလဲ့ ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီကအပါးစားပါလား။ ကျနော် သေချာကြည့်မိမှ သတိထားမိတယ်။ ကောင်မလေးက ဘော်လီ မဝတ်ပဲ ဘရာဝတ်ထားတာဗျ။ နောက်ကျောဘက် အင်္ကျီသားက အကြည်သားလို ဖြစ်နေလို့ ကြိုသေးသေးလေးနဲ့ အနက်ရောင်လို့ ထင်ရတဲ့ ဘရာလေးရဲ့အရာက ပေါ်နေတယ်။ ဘယ်လိုဟာလေးလဲဟ။ ရိုးရိုးလေး မိုက်နေတယ်လို့ပဲ ဆိုရတော့မယ်။
အမှန်က ဒါမျိုး အင်္ကျီဝတ်ရင် မိန်းကလေးတော်တော်များများက ဘော်လီပဲ ဝတ်ကြတာပါ။ တော်ယုံတန်ယုံ ဘယ်သူမှ ဘရာနဲ့ မဝတ်ကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ခရီးသွားရင်ပေါ့။ အခု ကျနော့်ရဲ့ခင်သန်းနုလေးကြမှ ဇာဘော်လီနဲ့ မဟုတ်ပဲ ဇာဘရာနဲ့ ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ် .. ခွိ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ ဖြုတ်ကြည့်မှ သိမှာပဲ။ ဝတ်ထားတဲ့ ဘရာပြောတာပါ။ တခြား မတွေးကြပါနဲ့. အ ဟီး။
ဟိုတွေး ဒီတွေးနဲ့ နဲနဲကြာသွားမှ သတိရသွားတယ်။ ကောင်မလေးက ရှေ့ဘက်ကို ပြန်လှည့်မလာသေးပဲ လမ်းမဘက်ကိုပဲ ငေးနေတာဗျ။ ကိုယ်ကလဲ တစောင်းလေးလို ခပ်ယို့ယို့လေး ဖြစ်နေတာ။ ကျနော် စိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ သူစိမ်း ယောက်ျာလေး တစ်ယောက်နဲ့ ထိုင်ရလို့များ တမျိုး ဖြစ်နေတာလား။ အင်း .. ငါ ဘာလုပ်ပေးရပါ့မလဲ။ တကယ်ဆို ကျနော်လဲ ကိုယ့်သိက္ခာကို ကိုယ်ထိန်းတဲ့သူပါ။ ထိုင်တာတောင်မှ အချို့သောယောက်ျားလေးတွေ ထိုင်နေတဲ့ ပုံစံဖြစ်တဲ့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကားပြီး ပစ္စည်းပြတဲ့ ပုံစံမျိုး ထိုင်နေတာမဟုတ်။ တကယ်လို့ အဲဒီလို ခြေကားယား ထိုင်နေတာဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့။ အခုတော့ …
အဲဒီအချိန်မှာ လေးဖြူခွေက စာမျက်နှာ၁၅ ကို ရောက်သွားတယ်။ ဒီ သီချင်းကြတော့ ခင်သန်းနုလေးက ပြတင်းပေါက်ကနေ ရှေ့ကိုလှည့်လာတယ်။ အခွင့်ကောင်းကို စောင့်နေတဲ့ ကျနော်က ..
“ညီမ ထိုင်ရတာ အဆင်ပြေလား …“
အတတ်နိုင်ဆုံး ချိုသာစွာ မေးရင်း ကောင်မလေးတွေ ကျတတ်တဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ ကျနော် ပြုံးပြလိုက်တယ်။ အမယ်။ သူမကတော့ ခပ်တည်တည်ပဲ။ မျက်လုံးလေး ဝင့်ကြည့်ယုံကလွဲလို့ ဘာမှ မပြောဘူး။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်ကပဲ ဆက်ပြောရတယ်။
“ဟိုလေ … ထိုင်ရတာ အဆင်မပြေရင် ခုံလဲပေးမလို့ပါ …. ဟိုရှေ့က ခုံနံပါတ် ၇ ၈ မှာ ထိုင်နေတာ အကို့ အဖေနဲ့ အမေပါ … တကယ်လို့ စိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်တယ်ထင်ရင် အကို့ အမေနဲ့ နေရာချင်း လဲပေးပါ့မယ် …“
ခင်သန်းနု အသေးစားလေးက အခုကျမှ ကျနော့် စကားကို သဘောပေါက်သွားတယ်ထင်တယ်။ ပြုံးသလိုလို မပြုံးသလိုလို မျက်နှာပေးနဲ့ ..
“ရပါတယ် … ကျွန်တော် နေတတ်ပါတယ် … ခင်ဗျား အဖေနဲ့ အမေကို အားနာစရာပဲ …မလုပ်ပါနဲ့ ..“
ကျနော်ကသာ ချိုချိုသာသာ ပြောပေမယ့် သူမအသံက တိုတိုတောင်းတောင်း ဖြစ်နေတယ်။ ဟွန်း .. ထားလိုက်တော့။ ပြောပုံဆိုပုံကလဲ ကျွန်တော်နဲ့ ခင်ဗျားနဲ့ .. ဘယ်လိုလဲဟ။ ငါ့တသက်မှာ ဘယ်ကောင်မလေးကမှ ငါ့ကို ခင်ဗျားလို့ မပြောခဲ့ဖူးဘူး။ ငနာမလေး။ ငါကလဲ မလဲချင်တာနဲ့ အံကိုက်ပဲ။ အဲဒီဘေးမှာသာ ထိုင်ပြီး ငါကြည့်တာ ခံနေပေတော့ …။
အမှတ်၃ လမ်းမကြီးရဲ့ လမ်းဆုံရောက်တော့ ကားက ခနရပ်တယ်။ ကျနော်လဲ နဲနဲ ရေငတ်လာသလို ဖြစ်တော့ ကားပေါ်မှာ အဆင်သင့်ပေးထားတဲ့ ရေဗူးကို ဖွင့်သောက်မိတယ်။ ရေငတ်ရတာလဲ အကြောင်းရှိတာကိုး။ ဘေးနားက ခင်သန်းနု အသေးစားကလုပ်နေတာလေ။ ကျနော် ရေသောက်ပြီး ပြန်ချတော့ သူမကလဲ ရေဗူးကို လှမ်းယူတာ တွေ့တယ်။ ဘာလဲဟ။ ငါလုပ်သလို လိုက်လုပ်နေတာလား။ ကျနော်လဲ သူကမှ ဘဝင်ဆိုတော့ ကိုယ်ကလဲ ဘဝင်ပဲပေါ့ ဆိုပြီး ဂရုစိုက်မနေပဲ လေးဖြူကိုသာ ဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။
လှမ်းခေါ်သံကြားမှ ကျနော် လှည့်ကြည့်မိတယ်။ ရေပုလင်းကို ကျနော့်ဘက် ထိုးပေးထားတာတွေ့ပြီး ..
“ကျွန်တော် ဖွင့်လို့ မရလို့ .. ပုလင်းအဖုံးက လည်လည်ထွက်နေတယ် …ခင်ဗျား ဖွင့်ပေးပါလား ..“
ကျနော်လဲ ဘာမှ မပြောပဲ ပုလင်းကို သူမလက်နဲ့ မထိအောင် လှမ်းယူလိုက်ပြီး ကောက်လှည့်လိုက်တယ်။ ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်။ သူမပြောသလို ပုလင်းအဖုံးက လည်လည်ထွက်နေလို့ လက်နဲ့ တော်တော်ထိန်းပြီး ဖွင့်ယူလိုက်ရတယ်။ ရတော့မှ ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ ခင်သန်းနုက အခုမှ ..
“ကျေးဇူး ..“ လို့ ပြောပြီး သူ့ချောင်ဘက် ပြန်ကပ်သွားတယ်။ ကျနော်လဲ ဘာမှ ပြောမနေတော့ပါဘူး။ လေးဖြူကို ဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ပုလင်းဖုံးဖွင့်ပေးတာလောက်နဲ့တော့ မိတ်ဆွေ မဖြစ်လောက်ပါဘူး။ တခြားဟာ ဖွင့်ပေးရရင်တော့ တမျိုးပေါ့ .. အဟီး။
ခနခန မှောက်တယ်ဆိုတဲ့ ရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်လမ်းမှာ ရွှေမန္တလာကားကြီးဟာ ငြိမ့်ငြောင်းစွာ ခရီးဆက်နေတယ်။ အချိန်တစ်နာရီလောက် ကျော်လာပြီမို့ လူတွေလဲ လေးဖြူကို သိပ်အာရုံမစိုက်နိုင်တော့ဘူး။ အပြင်ဘက်ငေးဖို့ကလဲ ဘယ်ကြည့်ကြည့် လယ်ကွင်းတွေပဲဆိုတော့ သိပ်ပြီး မထူးခြားတော့ဘူး။ ငိုက်တဲ့လူက စငိုက်လာပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကားစပယ်ယာက လေဖြူကို ထုတ်ပြီး နောက်ထပ် အခွေတစ်ခွေကို ထည့်လိုက်တယ်။ ကျနော်လဲ .. ဘာများလဲဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ဗမာကားတစ်ကား ဖြစ်နေတယ်။ ရုပ်ရှင်ကားကို ပြောတာပါ။ သဇင် အပိုင်း ၁ ၂ ၃ တွေ မဟုတ်ပါဘူး။
ဇာတ်လမ်းစပြီး ဆယ်မိနစ်လောက် ကြာရင်ပဲ ပြနေတဲ့ ဗမာကားရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ကျနော် သိသွားတယ်။ အင်း။ တိုးတက်တဲ့ အထဲမှာ တို့ ဗမာကားတွေ မပါသေးရှာဘူးပဲ။ တခါလာလဲ မဲပြာပုဆိုး မဲပြာထမိန် ဖြစ်နေတယ်။ မင်းသမီး ကြည့်ရအောင်လဲ အေးမြတ်သူက ဘေးနားက ခင်သန်းနုလောက်တောင် ဒီဇိုင်းက မမိုက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီထဲမှာ ရှိတဲ့ မန်ဘာတွေထဲမှာ အေးမြတ်သူတော့ မပါဘူး ထင်ပါရဲ့။ ခွိ။ ပါခဲ့ရင်လဲ ဆောရီးပါနော်။ ကျနော်က လောလောဆယ် ခင်သန်းနုလေးကို ပိုစိတ်ဝင်စားနေလို့ပါ။
အဲဒါနဲ့ ကျနော် အိတ်ထဲထည့်ထားတဲ့ အိုင်ဖုန်းကို ထုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ညာဘက်ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ နားကျပ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ကိုယ်ကို နဲနဲစောင်းလိုက်ရတာမို့ ခင်သန်းနုလေးနဲ့ နဲနဲပိုနီးသွားတယ်။ ကားထဲမှာ ဖြန်းထားတဲ့ ရေမွှေးနဲ့နဲ့ မတူတဲ့ သင်းပျံ့တဲ့ ရနံ့တစ်ခုကိုရတယ်။ သေချာ လေ့လာခွဲခြမ်းချင်ပေမယ့် တမျိုးထင်သွားမှာ စိုးလို့ နားကျပ်ရတာနဲ့ ကိုယ်ကို ပြန်မတ်လိုက်တယ်။ အိုင်ဖုန်းမှာ တပ်လိုက်ပြီး ယူကျူက ဒေါင်းထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ ကျနော် မျက်စိပင့်အကြည့်မှာ ခင်သန်းနုလေးက ကျနော်လုပ်နေတာကို ငေးနေတယ်။ သူ့စိတ်ထဲ ကျနော်က အချဉ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသွားတယ်ထင်ပါတယ်။ ကောင်မလေးရယ် … မင်းက အခုမှ သိတာလား။ တကယ်ဆို ကိုယ်လဲ ဝင်ဦးလောက် မဖြောင့်တာတောင် ပြနေတဲ့ ဇာတ်ကားထဲက မင်းသားလုပ်တဲ့ ငကြောင်ထက်တော့ သာပါသေးတယ်ကွယ် .. အ ဟင်း .. အ ဟင်း …
“အဲဒါ … One Direction အဖွဲ့လား …“
ကျနော်က One Thing ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ဖွင့်လိုက်တော့ နားထဲ မေးသံခပ်သဲ့သဲ့ ကြားလိုက်ရတယ်။ ဘယ်ဘက်က နားကျပ်ကို ဖြုတ်ပြီး ခင်သန်းနုဘက်ကို လှည့်လိုက်တယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ မျက်လုံးတွေက အရင်လို မဟုတ်ပဲ ဖော်ရွေတဲ့ အနက်တွေ ဆောင်နေတယ်။ ကျနော်လဲ ချိုချိုသာသာပဲ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူပေမယ့် လေးစားရမယ် မဟုတ်လား။ မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ အညီပေါ့လေ။
“ဟုတ်တယ် .. ဒါ နာမည်ကြီး သီချင်းလေ .. One Thing လေ .. ကြိုက်လို့လား …“
“ဟုတ် .. ကျွန်တော် ကြိုက်တယ် … ခင်ဗျား …အဲဒီ အမ်တီဗီ ဘယ်က ရတာလဲ …“
“ယူကျုက ဒေါင်းထားတာလေ .. အကို့မှာ နောက်တစ်ပုဒ်ရှိသေးတယ် … What makes you beautiful ဆိုတာလေ ..“
“အယ် .. တကယ် … ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်တယ် …“
ခင်သန်းနု မျက်နှာလေးက ဝင်းခနဲ ဖြစ်သွားပြီး ပျော်သွားတယ် ထင်ရတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ပါဟ။ မင်း အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ မျက်နှာကြီး တင်းထားတာ မကောင်းပါဘူး ကလေးရယ် …။
“ဟို .. ဟိုလေ .. အဲဒီ သီချင်းနှစ်ပုဒ် ကျွန်တော့်ပေးပါလား ..“
“ဟေ .. မင်းကို ပေးရမယ် …“
“ဟိုလေဗျာ … အဲဒီမှာ blue tooth ရှိတယ်မှတ်လား .. အဲဒါနဲ့ ပို့လို့ရတယ်လေ … “
အဲဒီတော့မှ ကျနော် သဘောပေါက်သွားတယ်။ ဉာဏ်ကြီးရှင်မလေးပဲ။ ပုံစံကသာ အဖွားကြီး ပုံစံ ဖမ်းထားပေမယ့် ခေတ်တော့ လိုက်မီသားပဲလို့။ အိုကေလို့ ပြောပြီး ကျနော် ဆက်တင်ထဲက အပြာကောင်ရဲ့သွားကို လိုက်ရှာလိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူမက လက်ကိုင်စလင်းဘတ်အိတ်ထဲကနေ သူမဖုန်းကို ထုတ်တယ်။ အလဲ့။ သူကလဲ မခေဘူး Samsung နဲ့ပဲ။ အင်း။ သူက ဆန်ဆောင်း ကိုယ်က အိုင်ဖုန်းဆိုတော့ မူပိုင်ခွင့်အတွက်တော့ မဖိုက်ရလောက်ဘူး ထင်တာပဲ။ ကောင်မလေးရယ် .. တကယ်တော့ ကိုယ်က မင်းနဲ့ဖိုက်ချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟင် … ကျနော့် အတွေးကြီးက တမျိုးကြီး ဖြစ်သွားလို့ ဆက်မတွေးတော့ပဲ သူမရဲ့ ဖုန်းကိုသာ ရှာနေလိုက်တယ်။
ဟော .. ရပြီ။ ဘေးချင်းထိုင်နေတာမို့ အဆင်ပြေပြေပဲ တွေ့လိုက်တယ်။ သီချင်းနှစ်ပုဒ် စလုံးကို ရွေးပြီး ရှယ်ပေးလိုက်တယ်။ တအောင့်လောက်ကြာတော့ သူမက “ရပြီ“ ဆိုပြီး ပြောတယ်။ ပြီးတော့ “ကျေးဇူးပဲ“ ဆိုပြီး ထပ်ပြောတယ်။ ဒီတစ်ခါ ကျေးဇူးပြောတာကတော့ ပထမတစ်ခါထက် ပိုပြီး အသက်ဝင်နေတယ်လို့ ပြောရမယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျနော်တိှု့နှစ်ယောက် ဘာရယ် ညာရယ် မဟုတ်ပဲ One Direction အဖွဲ့ ကောင်းမှုနဲ့ နဲနဲ စကားပြောမိသွားကြတယ်။ နဲနဲလဲ ခင်သွားတယ်လို့ ပြောရမယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ကျနော်က သိပ်ပြီး လိုက်ရောတယ် ထင်မှာစိုးလို့ သူမနောက်ကြောင်းကိုတော့ မမေးဘူး။ နာမည်ကိုလဲ သူမပြောမှပဲ ဆိုပြီး မေးမနေဘူး။ သူမစိတ်ဝင်စားတဲ့ သီချင်းအကြောင်း band တွေ အကြောင်းကိုသာ လိုက်ပြောနေလိုက်တယ်။ ခင်သန်းနုက မခေဘူးဗျ။ အင်္ဂလိပ်သီချင်း တော်တော်များများကို သိတယ်။ တချို့ သူမပြောတဲ့ သီချင်းတွေဆို ကျနော် ကြားပဲ ကြားဖူးတယ်။ နားမထောင်ဘူးဖူး။ ကျနော်လဲ ဘယ်ရမလဲ။ ကျနော့် ယူကျုက ဒေါင်းထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို ထုတ်ပြမိတယ်။ ဟဲ ဟဲ။ သူများ အားကျအောင် ပြောရရင်တော့ ယုံမလား မသိဘူး။ ဗမာကား တစ်ဝက်ကျိုးတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ နားကျပ်နှစ်ခုကို တစ်ယောက်တစ်ခုစီနဲ့တောင် နားထောင် ဖြစ်သွားတယ်။ နဲနဲလဲ ကိုယ်ချင်းကပ်သွားတယ်ပေါ့။ မဆိုးပါဘူး။ ဒီအတိုင်းသာဆို ညလုံးပေါက် အိပ်ရေးပျက်လဲ နစ်နာစရာမှ မရှိတာ .. အဟီး ။
ကားရှေ့ခန်းမှာတော့ ဗမာကားက ချစ်ကွဲညား ထုံးစံအတိုင်း ကွဲပြီးတော့ ညားဖို့ ပြန်တာဆူနေပြီ။ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ဘာရယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ ၉ နာရီတောင် ကျော်သွားပြီ။ ကျနော်နဲ့ ခင်သန်းနုလဲ ပြောစရာ စကားမရှိ။ နားထောင်စရာ သီချင်းမရှိတော့လို့ ဒီအတိုင်းပဲ ငြိမ်နေရပြီ။ ခင်သန်းနုက အခုအချိန်မှတော့ နံရံဘက်ကပ် မထိုင်တော့ပါဘူး။ တည့်တည့်လေးပဲ ကူရှင်နောက်မှီကို ကျကျနန မှီပြီး ထိုင်နေတယ်။ ခရီးက နဲနဲ ကြာလာလို့ထင်တယ်။ ကိုယ်ကလေးက မတ်မတ် မဟုတ်တော့ပဲ ခပ်လျော့လျော့ ဖြစ်နေတယ်။ တစ်ချက်တစ်ချက်လဲ လက်ကလေးပိတ်ပြီး သန်းနေတာ တွေ့တယ်။ အိပ်များ အိပ်ချင်နေတာလား။ ထိုင်နေတာကိုက ခြေထောက်တွေခပ်စင်းစင်းလေး ကျနော့်ဘက် နဲနဲစောင်းပြီး ချထားတယ်။ မျက်နှာလှလှလေးကတော့ ပြနေတဲ့ကားကို ကြည့်တယ်လဲ မဟုတ် မကြည့်ဘူးလဲ မဟုတ်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ငေးနေတယ်။ ကျနော့်ဘက်ကို သူမမျက်နှာရောက်နေတာမဟုတ်လို့ ကျနော် သူမကို သေချာကြည့်ပစ်လိုက်တယ်။
လှတာတော့ တော်တော်လှတဲ့ ကောင်မလေးပဲ။ မန္တလေးသူ အမိုက်စားလေးပဲ။ သူမ ဝင်ထိုင်တုန်းက မတ်တပ်ရပ်ပြီး နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတာမို့ သူမ အရပ်အမောင်းကို သတိထားမိတယ်။ ငါးပေရှစ် မြင့်တဲ့ ကျနော့်ထက် ခေါင်းတစ်လုံးသာသာလောက်ပဲ နိမ့်တယ်ဆိုတော့ ငါးပေလေးလောက်ရှိမယ် ထင်တယ်။ မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေထဲမှာ ငါးပေကျော်ရင်ပဲ ဟုတ်လှပြီလို့ ပြောရမယ့် အချိန်ဖြစ်လို့ သူမက အရပ်မြင့်တဲ့အထဲမှာ ပါပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကိုယ်လုံးက ပြည့်ပြည့်လေးမို့ ပိန်တယ်လို့ မထင်ရဘူး။ အထူးသဖြင့် နောက်ကိုမှီထားလို့ မောက်မောက်မို့မို့ဖြစ်နေတဲ့ ရင်နှစ်မွှာက ထွးတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ထမိန်စကတ်ဝတ်ထားပေမယ့် ဆီးခုံနေရာလေးက မို့မို့လေး ဖြစ်မနေဘူး။ ဝမ်းဗိုက်သား အဆီမထွက်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ ကြည့်နေရင်း ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကိလေသာက အလိပ်လိုက် တက်လာတယ် … ဟူး …
“ရပါတယ် အကို …“
ကျနော် အညောင်းဆန့်ပြီး ခြေထောက်ကို ဆန့်လိုက်တော့ ကျနော့်ဘက်ရောက်နေတဲ့ ပေါင်တံတစ်ဖက်ကို သွားပွတ်မိတယ်။ ကိုယ့်အထင်သေးသွားမှာစိုးလို့ ကျနော်ပဲ အရင်ဦးအောင် တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ ကားမထွက်ခင်ကဆိုရင်တော့ တမျိုးဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အခုတော့ ကောင်မလေးက သာသာလေး ပြုံးပြီး ရပါတယ်လို့ ပြောတယ်။ ထူးခြားတာက ခင်ဗျားဆိုတာကြီး ပျောက်သွားပြီး ကျနော်ပြောတဲ့ အတိုင်း အကိုဆိုတာ ဖြစ်လာတယ်။ ကျနော် ပြောပါတယ် ဘယ်ကောင်မလေးမှ ကျနော့်ကို ခင်ဗျားလို့ မပြောပါဘူးလို့ ..။
အဲဒီနောက်တော့ သူမက ပုံစံမပျက် ခပ်စောင်းစောင်းလေးနဲ့ မျက်စိမှိတ်သွားတယ်။ ပြနေတဲ့ ဗမာကားကလဲ ညားဆိုတဲ့ အပိုင်းရောက်ပြီး ခနကြာတော့ ပြီးသွားတယ်။ စပယ်ယာလုပ်သူက ခွေကို ပြန်ထုတ်ပြီး နောက်တစ်ခွေထည့်လိုက်တော့ အော်ဒီယို ဖြစ်သွားပြီ။ သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ ဟိုက်ဝေးကားသမားတွေ အကြိုက် စိုင်းထီဆိုင်ပေါ့။ ဟို သံယောဇဉ်ခိုင်မာထဲက သီချင်းကစလာတယ်။ တကယ်ပဲမေရယ် ကိုယ်ကတော့ ချစ်တာ တစ်ခုပဲသိတယ်ဆိုတာလေ။ အင်း … ခက်တော့ခက်နေပါပြီ။ ငါ့ဘေးနားမှာလဲ ချစ်စရာ ကောင်မလေးက အိပ်ပျော်နေပြီ ထင်တယ်။ ကားကြီးတစ်ကားလုံးလဲ တိတ်ဆိတ်လို့။ ကားထဲမှာ ထွန်းထားတဲ့ မီးရောင်ကလဲ ခပ်မှိန်မှိန်ရယ်။ မကောင်းမှုတို့သည် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ရာတွင် အရင်းခံသည်ဆိုတော့ …. အင်း …
ရော် .. ခက်တော့ ခက်နေပါပြီ။ ကြိုက်မရှက် ငိုက်မရှက်ဆိုတဲ့ စကားမှာ ဘေးနားက မန္တလေးသူက ငိုက်မရှက်ဆိုတာကို အကောင်အထည်ဖော်နေပြီ။ ခပ်စောင်းစောင်းလေး ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်ကလေးက တဖြေးဖြေးယိုင်လာပြီး သူမမျက်နှာလေးက ဘေးကို စောင်းလာတယ်။ ကျနော်ကလဲ ခင်သန်းနုလေးနဲ့ အဆင်ပြေပြီးကတည်းက ကိုယ်က သူမဘက် ခပ်ယို့ယို့ဆိုတော့ သူမ ဆတ်ခနဲ အငိုက်မှာ ခေါင်းက ကျနော့်ပုခုံးပေါ် ရောက်လာတယ်။ တမင်တကာလုပ်တာလားလို့ သူမဘက် အသာစောင်းကြည့်တော့ နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် အိပ်ပျော်နေတာ တွေ့တယ်။ လက်ကလေး နှစ်ဘက်ကတော့ စလင်းဘတ်အိတ်ကလေးကို ပိုက်ထားလျက်သားလေး။
ဒီအရွယ်ဆိုတာ သွေးသားကောင်းသူမို့ သူမလိုမျိုး ကျန်းမာသန်စွမ်းသူအတွက် ခရီးသွားရင်း အိပ်ပျော်တယ်ဆိုတာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဆန်းနေတာက ကျနော် ဖြစ်နေတယ်။ ရင်ထဲမှာ ကောင်းစိတ်နဲ့ မကောင်းစိတ်က လွန်ဆွဲနေတယ်။ တကယ်ပါဗျာ။ ကျနော် အခွင့်ကောင်းယူတတ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ လူကြပ်ကြပ် ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ မိန်းမပျိုလေးတွေနဲ့ တိုးစီးခဲ့ရတာတောင် ဘာမှ ထွေလီကမာ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ တခါတလေများဆိုရင် ကျနော့်ဖာသာကျနော် ရှောင် အတင်းပြန်တိုးထွက်ပြီး နောက်အပေါက်ကနေ တွယ်စီးခဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ နှာဝကို ကျီစယ်သလို ဖြစ်နေတဲ့ ခင်သန်းနုလေးရဲ့ရနံ့က ကျနော့်စိတ်ကို ကယောက်ကယက် ဖြစ်လာစေတယ်။ ပိုဆိုးတာက ရွှေမန္တလာ တစ်စီးလုံးကလဲ အိပ်မောကြနေတဲ့အလား တိတ်ဆိတ်နေတယ်လေ …။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူမကိုယ်ကလေးက တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ သူမများ နိုးတာလားလို့ ကျနော်က ကြည့်လိုက်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ မယ်မင်းကြီးမက ကိုယ်ကိုရွှေ့ပြီး မှီလျက်ဆက်အိပ်နေတာ။ အဲ .. ခက်တာက ဒီတစ်ခါ သူမက ခြေထောက်ကို ခပ်ကျဲကျဲထားလိုက်လို့ ခွဲထားတဲ့ ထမိန်စကတ်နေရာလေးက နဲနဲလေး ဟသွားတယ်။ တခြားသူတွေ မမြင်နိုင်ပေမယ့် ဘေးက ထိုင်နေတဲ့ ကျနော်ကတော့ မြင်တာပေါ့။ ခြေသလုံးသား ဝင်းဝင်းလေးတွေက ဒူးခေါင်းနားထိပေါ်နေတာကို။
ကျနော် တံတွေးကို မြိုချမိတယ်။ ဘယ်ဘက်ပုခုံးကို မှီထားတဲ့ သူမကို ကြည့်တော့ မျက်နှာဖူးဖူးလေးက အိပ်မောကျနေတုန်းပဲ။ မျက်နှာလှလှလေးကို တစိုက်မတ်မတ်ကြည့်မိလို့ ကျနော် ရင်ခုန်နှုန်းက အရင်ကထက် ပိုမြန်လာတယ်။ အသိစိတ်ကို ထိန်းပြီး အကြည့်ကိုလွှဲကာ ဘေးဘီကို ကြည့်မိတော့ ဘေးနားက အဒေါ်ကြီးက ကျနော့်ဘက် ဖင်ပေးပြီး အိပ်နေတာ တွေ့တယ်။ ရာဝင်အိုးလောက် ရှိမယ့် တင်ပါးကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး နဲနဲတော့ ဖီးလ်လာနေတာ လျော့သွားတယ်။ ကိုယ့်အခြေအနေကို ထိန်းတဲ့အနေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲ ဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ဘေးနားကလူတွေက အိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတာ တွေ့တယ်။ ဘယ်လိုလဲဟ။ ကာလနဂါးအုပ်စုထဲများ ငါလာကျနေတာလား။
စိတ်ကိုထိန်းပြီး သူမဘက် ပြန်မလှည့်မိအောင် နေပေမယ့် ပါးချင်းထိမလိုတောင် ဖြစ်နေတဲ့ ခင်သန်းနုလေးရဲ့ ဆွဲဆောင်အားကို ကျနော် တာရှည် မခံနိုင်ပါဘူး။ သိပ်မကြာခင်ပဲ သူမဘက်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်မိတယ်။ လှပနုနယ်တဲ့ မျက်နှာလေးက ကျနော့်ကို စောင့်နေတယ်။ ဝင်းဝင်းလေး ပေါ်နေတဲ့ သလုံးသားလေးတွေ … အသက်ရှူလိုက်တိုင်း မသိမသာလေး မို့သွားတဲ့ ရင်နှစ်မွှာ .. ဒါတွေကို ကသိုဏ်းရှူနေမိတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ ဦးပုညပြဇာတ်ထဲက ရေသည်ယောက်ျား ပြည့်ရှင်မင်းကို သတ်ဖို့ကြံသလို ချီတုံချီချ ဖြစ်နေတယ်။ လက်ထဲကိုင်ထားစရာ သန်လျက်မရှိပေမယ့် ကျနော့်ရဲ့ လက်တွေက လေးလေးပင်ပင်အရာတစ်ခုကို ကိုင်ထားသလို စီးစီးပိုးပိုး ဖြစ်နေတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ကျနော် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို အတင်းမဲတင်းပြီး ချလိုက်တယ်။ ကြောက်ရင်လွဲ ရဲရင်မင်းဖြစ်ဆိုတဲ့ စကားလက်ကိုင်ထားပြီး မျက်ကန်း စိတ်ဓါတ်မွေးလိုက်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးပြီးချင်းပဲ ခင်သန်းနုလေးဘက်ကို လှည့်လိုက်တယ်။ ကိုယ်ကို မသိမသာလေးလုပ်ပြီး စောင်းလိုက်တယ်။ သူမ တကယ်အိပ်မောကျနေတာကိုး။ အမှီမပျက်ပဲ ကျနော့်ဘက် ပါလာတယ်။ သေချာကြည့်မယ်ဆို သူမနဲ့ ကျနော်က သမီးရည်းစားတွေ ပွေ့ပိုက်ထားသလိုတောင် ဖြစ်နေပြီ။ ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲမှာ သူမရောက်နေပြီလေ။
ကျနော် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ညာဘက်ခေါင်းစောင်းပြီး ဘေးဘီကို ကြည့်တော့ အရာရာက အနေအထားမပျက်ပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်ချရပြီဆိုတာနဲ့ ကျနော် ညာလက်ကို အသာလေး မသိမသာ ရွှေ့လိုက်တယ်။ ကျနော့် ဘယ်လက်ကိုတော့ ဒီအတိုင်းပဲ သူမတင်ပါးအိအိလေးနဲ့ ထိမြဲအတိုင်း ထိထားတယ်။ သူမကတော့ ဘယ်လိုနေလဲ မသိဘူး။ ကျနော့် ရင်ထဲမှာတော့ တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ကို ခုန်နေတာပဲ။ ငါ လုပ်တာ မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာ အကြိမ်တစ်ရာမက ပြောမိနေပေမယ့် သူမရဲ့ ပေါင်တံတစ်ဖက်ဆီ တိုးကပ်သွားတဲ့ လက်ကိုတော့ နောက်မဆုတ်မိဘူး။
ဘုရားရေ .. ကျနော့်ဘဝမှာ ရင်အခုန်ဆုံးအချိန်ဟာ ဒီအချိန်များလား။ ကျနော့် ဘယ်လက်က သူမတင်ပါးတစ်ခြမ်းနဲ့ ထိကပ်နေတာကို ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် ညလက်က သူမရဲ့ ပေါင်တံလေးအား ထိသွားတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ရင်ခုန်သံကိုတောင် ကိုယ်ပြန်ကြားနေရတယ်။ ဒီအချိန်များ နှလုံးခုန်နှုန်းကို တိုင်းရင် ဖော်ပြချက်က ဘယ်လောက်တောင်များ ရှိနေမလား မသိဘူး။ သင်္ကြန်တွင်းမှာ အိတ်ဇော်ဖြုတ်ထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်တောင် ကျနော့် ရင်ခုန်သံလောက် ကျယ်မယ်မထင်တော့ဘူး။
အစပထမတော့ ကျနော် ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ ပေါင်တံလေးပေါ် ရောက်နေတဲ့ ကျနော့်လက်ကို ဒီအတိုင်းပဲထားတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲဒီငြိမ်နေတဲ့လက်ဟာ မသိမသာလေး တုန်နေတာ ဆိုတာ တွေ့လိမ့်မယ်။ သေချာတာက ဒါဟာ ရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်လမ်းကြောင့် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပဲ။ နှစ်မိနစ်လောက် ကြာတော့ ကျနော် ခင်သန်းနု မျက်နှာလေးကို အကဲခတ်ကြည့်မိတယ်။ ကလေးငယ်တစ်ယောက် အိပ်မောကျနေသလို ပကတိ အိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတာ သေချာတယ်။ နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ပေါ့ ။ ကျနော် အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှူသွင်းပြီး လက်ကိုသာသာလေး ထိပွတ်လိုက်တယ်။ ပျော့ပျောင်းတဲ့ အဝတ်မို့ သူမပေါင်တံကို ပွတ်မိတာနဲ့ မခြားပါဘူး။ လက်ထဲမှာ ဖိန်းဖိန်းရှိန်းရှိန်း ဖြစ်လာရောဗျာ …။
မိနစ်ပိုင်းလောက်အတွင်းမှာ ကျနော် သူမပေါင်လေးကို အထက်အောက် ရွရွလေး ပွတ်သပ်ပေးနေမိတယ်။ ခင်သန်းနုလေးဆီကတော့ ဘာအရိပ်အယောင်မှ ပြတာ မတွေ့ဘူး။ ကိုယ်ကိုလဲ ရွှေ့တာမတွေ့သလို တခြား မျက်နှာအမူအယာ ပြောင်းလဲတာလဲ မတွေ့ဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ ကျနော့်ပုခုံးကို မှီလျက် ဆက်အိပ်ပျော်နေတယ်။ ကျနော်လဲ တဖြေးဖြေးလက်ရဲလာတာနဲ့ စိတ်ကိုတင်းပြီး လက်ကို ပွတ်ပေးနေတဲ့ ပေါင်ပေါ်ကနေ နဲနဲ အတွင်းဘက်ကျကျကို ရွှေ့လိုက်တယ်။ သူမ စကတ်ထမိန်က ဘယ်ဖုံးဆိုတော့ အံကိုက်ဖြစ်သွားတယ်။
အထဲကို ရွှေ့လိုက်တဲ့လက်ဟာ ထမိန်သားကို မစမ်းမိတော့ပဲ နူးညံ့တဲ့ အသားကို ထိမိသွားတယ်။ တင်းတင်းပြည့်ပြည့် ဖြစ်နေသလို အိအိဖြိုးဖြိုးလဲ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ခင်သန်းနုလေးက နဲနဲတွန့်သွားတာ သတိပြုမိတယ်။
“ဟင်း .. ဟင်း …“
ကျနော် တကိုယ်လုံးမှာ ရှိသမျှ အမွေးတွေ အကုန်ထောင်တက်သွားတယ်။ ခေါင်းနပန်းကြီးတယ်ဆိုတာ ဒါပဲလားမသိဘူး။ စိတ်ထဲ ဘုရားစာ ရွတ်မိမလို ဖြစ်ပြီးမှ မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီး ပြန်ရပ်လိုက်ရတယ်။ ညာဘက်ပေါင်တွင်းကို ထိမိလိုက်တဲ့ လက်ကို ကော်နဲ့ကပ်ထားတဲ့အလား ငြိမ်နေအောင် ထားရင်း သူမကို စောင်းကြည့်မိတယ်။ နိုးများနိုးသွားတာလားလို့။ ခင်သန်းနုလေးက မနိုးပါဘူး။ ပြန် အိပ်ပျော်နေတာ တွေ့တယ်။
ကျနော် သက်ပြင်းမောတစ်ခုကို ခိုးချပြီး ဘာဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားမိတယ်။ သူမပေါင်ကို ထိထားတဲ့ လက်ကို ရုပ်လိုက်ရင် ကောင်းမလား .. အင်း.. ခက်တော့တာပဲ။ ခုနက ဒါမျိုး ပွတ်ပေးခွင့်မရခင်ကတောင် စိတ်ကနောက်ဆုတ်ဖို့ မရှိတာ။ အခုလိုမျိုး ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကိုင်နေရမှတော့ ဘယ်လွှတ်ချင်ပါတော့မလဲ။ အခွင့်အရေးယူတာ မဟုတ်ပေမယ့် ရတဲ့ အခွင့်အရေးကိုတော့ လက်မလွှတ်ချင်ဘူး။ မလွှတ်ချင်လို့ပဲ ကိုင်မိတာ မဟုတ်လား။ တိတ်ဆိတ်အိပ်မောကျနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲ ကျနော့်မကောင်းစိတ်ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ အားပေးအားမြှောက်ပြုနေရှာတယ်။
အဲဒါနဲ့ ကျနော် အသာလေး ပြန်ပြီး လက်ကို လှုပ်ရှားမိတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ အဝတ်ပေါ်က မဟုတ်တော့ပဲ ပကတိအသားကို ကိုင်ရတာမို့ ပိုပြီးတော့ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းနေတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ဖီလင်တက်လာပြီး ကျနော့်ဘောင်းဘီခွကြားထဲက အကောင်က မာတက်လာတယ်။ တော်သေးတယ်။ ကျနော်က ကားပေါ်မတက်ခင်ကတည်းက အတွင်းခံထဲမှာ သကောင့်သားကို အလျားလိုက်လေး ထောင်ပြီးထားခဲ့တော့ အခုလို မာတက်လာချိန်မှာ ဂျင်းဘောင်းဘီသားကို သွားထောက်မနေဘူး။ နေရထိုင်ရ မခက်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ယောက် ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင် သိသာပါတယ်။ ဘောင်းဘီခွအပေါ်ဘက်မှာ ဖောင်းဖောင်းကြီး ဖြစ်နေတာကို …။
ကျနော့် လက်ဟာ တဖြေးဖြေး ပွတ်ရင်းပွတ်ရင်းနဲ့ အထက်ဘက်ကို တက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လိုချင်သလောက် သွားလို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကောင်မလေးက စလင်းဘက်အိတ်လေးကို ပိုက်ထားတာက တစ်ကြောင်း၊ သူမစကတ်ထမိန်က အပေါ်မှာ ပြန်သီထားတာက တစ်ကြောင်း ကျနော့်လက်ကို တားထားသလို ဖြစ်နေတယ်။ တကယ့်နေရာလေးကို မရောက်နိုင်ဘူး။ စိတ်ထဲမှာတော့ ကသိကအောင့် ဖြစ်နေသလို၊ တံတွေးလဲ ခနခန မြိုချနေရတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ရမလဲဆိုတာကို ထပ်ပြီးတော့ ကြံဆနေမိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ …
“ခင်ဗျား … ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ …“
ကျနော့်လက်ကို ဖြတ်ခနဲ လာကိုင်တာနဲ့အတူ ခင်သန်းနု ကျနော့်ပုခုံးပေါ်ကနေ ရုတ်တရက် ခွာသွားတယ်။ ကျနော်ဘာမှ ပြင်ဆင်ချိန် မရလိုက်ဘူး။ ကျနော့်ဘက်ကို လှည့်ပြီး သူမက စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်နေတယ်။
“ဟို .. ဟို .. ဟိုလေ …“
ကျနော့်မှာ လည်ချောင်းတွေကပ်ပြီး နေမကောင်းခါစ လူမမာလို ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး။ စိတ်ထဲမှာတော့ ငါတော့ သွားပြီဆိုတာ သိနေတယ်။ ပြသနာပဲ။ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်းတော့ ဖြစ်ပြီ။ ဘယ်လိုရှင်းရပါ့မလဲ။ အဖေ အမေသာ သိရင် ဒုက္ခပဲ။ အိမ်ပေါ်က မဟုတ်ပေမယ့် ကားပေါ်က ခေါင်းနဲ့ဆင်းရမယ် ထင်တယ်။ ခင်သန်းနုလေးကို ဘာပြောရမှန်း မသိပဲ ထိတ်လန့်တကြီး စိုက်ကြည့်နေမိတယ်။
“ဘာမှ ဟိုဟို ဒီဒီတွေ လုပ်မနေနဲ့ … တကယ်တဲ … လုပ်မယ်ဆိုလဲ သေချာလုပ် .. ယားကျိယားကျိနဲ့ ရွရွလေး လုပ်မနေဲ့ … ကျွန်တော် မကြိုက်ဘူး…“
ကျနော့် ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားတယ်။ မန္တလေးသူကို မယုံနိုင်အောင် ကြည့်နေမိတယ်။ ငါ့များ နားကြားလွဲတာလားလို့။ ဒါမှမဟုတ် သူမကပဲ အိပ်မက်မက်ပြီး ယောင်ပြောနေတာလား။ မျက်လုံးလေး အဝိုင်းသားနဲ့ ကျနော့်ကို ပြန်ကြည့်နေတဲ့ ခင်သန်းနုလေးကြောင့် ဒါဟာ တကယ်ဆိုတာ ကျနော် နားလည်လိုက်တယ်။ တစ်ခုခုပြောမယ် ပြင်တုန်းရှိသေး။ သူမက ကျနော့်ပုခုံးပေါ်ခေါင်းတင်ပြီး ခုနကအတိုင်း ပြန်မှီလိုက်တယ်။ ကျနော့်လက်ကို ကိုင်ထားတဲ့ သူမလက်ကိုလဲ လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါ့ထက်ပိုတာက သူမရဲ့စလင်းဘတ်အိတ်ကို ပေါင်ပေါ်ကနေ ယူပြီး မှန်ပြတင်းဘောင်ဘက်ကို ချလိုက်တာပဲ။ ပြီးတာနဲ့ မျက်စိလေးနှစ်လုံးက မှိတ်သွားတယ်။
“ဟူ ရေး ….“
စိတ်ထဲမှတော့ ပတ္တမြားငမောက်ကို လမ်းလျှောက်ရင်း ခလုတ်တိုက်မိတဲ့သူလောက် နီးနီး ပျော်သွားတယ်။ ကံကိုယုံပြီး ဆူးပုံနင်းလိုက်တော့ ဘယ်ဘဝက အကျိုးပေးကောင်းခဲ့လို့လားတော့ မသိဘူး။ ဆူးပုံက ဆူးစရာ ဆူးမရှိတော့ပဲ ပန်းမွေ့ယာ ဖြစ်သွားပြီ။ ပျော်လိုက်တာ။ ရင်တဒိတ်ဒိတ်ခုန်လျက်ပဲ ကျနော် လက်ကို သူမပေါင်ပေါ် ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ခင်သန်းနုလေး ကိုယ်က တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ အရမ်းအသိသာကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကိုယ့်တစ်ခြမ်းက ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲ ရောက်သလိုဖြစ်နေလို့သာ ကျနော်က သတိပြုမိတာပါ။ ပါးစပ်ဖျားက ကြောင်ပေါက်ကလေး ညည်းသလို အဲဒီ အီဆိုတဲ့ အသံကိုလဲ သဲ့သဲ့လေးသာ ကြားရတာလေ။ အကျယ်ကြီး မဟုတ်ဘူး။ တိုးတိုးမှ တကယ့်တိုးတိုးလေး။ ကျနော် အသာစောင်းငဲ့ကြည့်တော့ မျက်တောင်လေးတွေ နဲနဲ လှုပ်နေတာတွေ့တယ်။ သဘောကတော့ အိပ်နေတာ မဟုတ်ပဲ မျက်စိမှိတ်ပြီးမှေးနေတာပေါ့။ ကျနော်လဲ သိပ်အညံ့စား မဟုတ်လို့ ခင်သန်းနုလေး ဘယ်လိုသဘောထားတယ်ဆိုတာကို ချက်ချင်းသိလိုက်ပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ပွင့်လင်းရဲရင့်တိုးတက်လာတာ နေရာဒေသ မရွေးပါလားဆိုတဲ့အချက်နဲ့ ဘန်းကျော်ကို အကောင်းမြင်တတ်သွားတယ်။ အော် .. ဒီမိုကရေစီတောင် ရနေပြီ မဟုတ်လား။
နူးညံ့တဲ့ အသားဆိုင်တွေဟာ ကျနော့်လက်ထဲကို တဖန် ပြန်ရောက်လာတယ်။ terms and condtions တွေမပါတဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကို ရရှိထားသူမို့ ကျနော် ဒီတစ်ခါတော့ လက်ကတော်တော်သွက်နေတယ်။ ခနတာ အချိန်အတွင်းမှာတင် နာရီချိန်သီးလွှဲသလို ကျနော်လက်က အပေါ်အောက်ကို ပြေးနေတယ်။ နာရီချိန်သီးနဲ့ မတူပဲ တစ်ခုကွာတာက ကျနော့်လက်က အပေါ်ပိုင်းကို ပိုပိုရောက်လာတဲ့အချက်ပါ။ အသားချင်းတူပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ အပေါ်ဘက်ရောက်လာလေလေ ပိုကိုင်လို့ ကောင်းလာလေလေလို့ ခံစားနေရတယ်။ ရွှေမန်းသူ ခင်သန်းနုလေးကတော့ ဘယ်လိုနေမယ် မသိဘူး။
တကယ်တော့ ခင်သန်းနုလဲ စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ သူမဘက်ကို လှည့်ကာ ခေါင်းစောင်းထားလို့ ကျနော့်ရဲ့လည်ပင်းကို လာထိနေတဲ့ သူမနှာဝက လေနွေးနွေးလေးတွေက သက်သေပြုနေပါတယ်။ ပုံမှန် မဟုတ်ပဲ ခပ်ပြင်းပြင်းလေး မှုတ်ထုတ်နေရတယ်ဆိုကတည်းက သူမ စိတ်ပါနေတယ်ဆိုတာ ဗေဒင်မေးစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့အတိ တိုင်းချုပ်ထားတဲ့ ရင်ပုံးအင်္ကျီအောက်က ရင်နှစ်မွှာကလဲ တုန်ခါနေတယ်လေ။ ရှုပ်ပါတယ် ကွာ။ ဒီအဆင့်ထိ ရောက်မှတော့ နောက်ဆုတ်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ အဓိကနေရာကို ရောက်အောင်သွားတော့မယ်။ စိတ်မြန်လက်မြန်ဆိုတာ ကျနော့်အတွက်များ ပြောထားတာလား မသိဘူး။ ပေါင်အတွင်းဘက်ရောက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ လက်က ချက်ချင်း အထဲကို ထိုးနှိုက်ပြီး ဝင်သွားတယ် …
“အကို … ခန … အရမ်းမလုပ်နဲ့ ….ကျွန်တော့် လုံချည်ချုပ်ရိုးတွေ ပြုတ်သွားမယ် ..“
“ဟုတ် … ဟုတ် … ဆောရီး …“
ခင်သန်းနုလေးက ကျနော့်လက်ကို ကိုင်ပြီး မူသလို နွဲ့သလို ဖြစ်နေတဲ့ အသံနဲ့ တားရှာတယ်။ သူမအသံက နေပူထဲက ပြန်လာတဲ့ လူတစ်ယောက် စကားပြောသလိုမျိုးအတိုင်းပဲ။ မောတယ်လို့ ပြောလို့မရပေမယ့် ပုံမှန်လေသံတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လဲ ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ အသံက အာလုပ်သံကြီးပါနေတယ်။ နောက်ပြီး ဘာပြောရမှန်း မသိဖြစ်နေတာ။ ခါတိုင်းဆို တွေ့တဲ့လူတိုင်းက အပြောချို စကားသွက်တယ်ဆိုတဲ့ သူက အခုကျတော့ ပါးစပ်ထဲ အာစေးထည့်ထားတာ ခံရသလို ဘယ်ကစပြောရမှန်း မသိဘူး။ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းလဲ မသိဘူး။
“ကျွန်တော့် ခါးဘေးနားမှာ ချိတ်ရှိတယ် … အဲဒါကို အောက်ဆွဲဖြုတ်လိုက် … တခြားသူလဲ မြင်သွားဦးမယ်နော် …. “
“ဟုတ် … ဖြုတ်လိုက်မယ် ….“
ချက်ဆို နားခွက်က မီးတောက်တဲ့ အကျင့်က ရှိနေတော့ မန္တလေးသူ တိုးတိုးလေးကပ်ပြောတဲ့စကားက ဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာ သိတယ်။ ဦးနှောက်က လက်ကို ဘာမှ အထွေအထူး ခိုင်းနေစရာတောင် မလိုဘူး။ အထဲရောက်နေတဲ့ လက်က ချက်ချင်း အပြင်ပြန်ထွက်လာပြီး သူမရဲ့ညာဘက်က ခါးဘေးနားကို စမ်းတယ်။
ဟော တွေ့ပြီ ..
မာမာလေး ဖြစ်နေတဲ့ ကလစ်လေးလို ခေါင်းကိုစမ်းမိတာနဲ့ အသာလေးကလော်ထုတ်ပြီး အောက်ကို ဆွဲချလိုက်တယ်။ စိတ်ထဲထင်လို့လား မသိဘူး။ နားထဲ ရွီခနဲ မြည်တဲ့ ဇစ်သံကို ကြားလိုက်ရသလိုပဲ။ ဒါတောင် သူတို့မိန်းကလေးတွေရဲ့ စကတ်ဇစ်က ကျနော်တို့ ဂျင်းဘောင်းဘီက ဇစ်တွေလို အမာစားမဟုတ်ဘူး။ ကျနော့်ကို မှီထားတဲ့ ခင်သန်းနု ကိုယ်လုံးလေးလဲ ဒီအသံကြောင့် ဆတ်ခနဲ တုန်သွားရှာတယ်။ မှီထားတဲ့ ခေါင်းလေးက ကျနော့်ကို မော့ကြည့်လာတာ တွေ့တယ်။ ကျနော်လေ ဘာလုပ်လဲ သိလား။ ဒီအချိန်ကျမှတော့ ရွှေမန်းသူကို တခြားကိစ္စတွေ စဉ်းစားခွင့် မပေးတော့ဘူး။ ကိုယ့်မျက်နှာနားမှာ ရီရီဝေဝေလေး လာမော်ကြည့်နေတဲ့ ကောင်မလေး မဟုတ်လား။ ပြီးတော့ သူမကလဲ အလိုတူ အလိုပါပဲလေ။ လူမိမယ်ဆိုရင်တောင် သူလေးလဲ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုထဲ ဆွဲထည့်ရမှာပဲ။
ကျနော့် နှုတ်ခမ်းက သူမနှုတ်ခမ်းကို လာထိမယ်ဆိုတာ သိနေပေမယ့် ခင်သန်းနုလေးက ရှောင်မထွက်ပါဘူး။ မျက်နှာကို မော့ထားတဲ့အတိုင်း ဆက်ရှိနေတယ်။ နွေးခနဲ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုချင်း ထိတဲ့အချိန်မှာ သူမ မျက်တောင်လေးတွေ မှေးကျသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျနော်က မျက်စိဖွင့်ထားလို့ သိလိုက်တယ်။ မျက်စိကလဲ မဖွင့်ထားလို့ မဖြစ်ဘူးလေ။ ဟိုင်းဝေးမှာ သွားနေတဲ့ အိတ်စပရက်စ် ကားကြီးပေါ်မှာ ကိုယ်တွေက ကစ်ဆင်ဆွဲနေတာကိုး။
အားပါး .. ကောင်းလိုက်တာ .. တယ်လဲ နမ်းလို့ကောင်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးပဲ။ သူများတွေတော့ မသိပေမယ့် ကျနော်က နမ်းရင် အရသာခံပြီး နမ်းတတ်တယ်။ ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အနမ်းခံရတာ မဆန်းဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ ကျနော် နမ်းလိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် ဆန်းရအောင် နမ်းတတ်တယ်။ ဘယ်လိုမျိုး နမ်းတယ်ဆိုတာကတော့ ဒီနေရာမှာ ပြောမကောင်းလို့ မပြောတော့ဘူး။ မယုံရင် ရွှေမန္တလာကားပေါ်သာ လာကြည့်ပေတော့။
မရည်ရွယ်ပဲ နမ်းလိုက်မိလို့ တဒင်္ဂတော့ လက်က ငြိမ်သွားတယ်။ ချိုမြတဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးနှစ်ခုရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအောက်မှာ နစ်မျောပျော်ဝင်သွားတယ်လို့ ဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော် က သတိလွတ်တတ်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူး။ ဆယ်တန်းလောက်တုန်းက အသေကျက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာစာ စာစီစာကုံး ခေါင်းစဉ်တွေ ဖြစ်တဲ့ အချိန်ရှိခိုက်လုံ့လစိုက်၊ လသာတုန်းဗိုင်းငင်၊ မိုးရွာတုန်းရေခံဆိုတာတွေရဲ့ နောက်တိုး ချိတ်ပြုတ်တုန်းလက်နှိုက်ဆိုတာကို ကျင့်သုံးလိုက်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ အောက်ကနေ ပင့်နှိုက်တာမဟုတ်ပဲ။ အပေါ်ကနေကို ပြန်နှိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒီတော့ ဘယ်ကိုသွားထိမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့ ….။
နှုတ်ခမ်းချင်းထိနေတဲ့ ရွှေမန်းသူလေးရဲ့ပါးစပ်ဖျားကနေ အသံတိုးတိုးလေးတွေ လွင့်ထွက်လာတယ်။ နားထဲမှာ ဘာသံရယ်လို့ ခွဲရခက်နေပေမယ့် ကျနော့်ဘယ်ဘက်ပေါင်ကို သူမလက်နဲ့ လာဖျစ်မှုကြောင့် သူမ စိတ်ကြွလာပြီဆိုတာကို ရိပ်မိလိုက်တယ်။ စိတ်တွင်မက ကျန်တာတွေရော ကြွနေပြီလားဆိုတာကို သိဖို့ လက်ကိုအောက်နဲနဲ ထပ်လျှောလိုက်တယ်။ ကြက်မောက်သီးခြင်းထဲကို လက်နှိုက်လိုက်သလို ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ထားပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ လမ်းက ရှင်းနေတယ်။ ဟင် .. ရန်ကုန် မန္တလေးကို အမြန်လမ်းက သွားလို့ ပညတ်သွားရာပဲ ဓါတ်သက်ပါနေတာများလားတော့ မသိဘူး .. အ ဟီး။ ရွှေမန်းသူလေးရဲ့အဓိကနေရာကို သွားတဲ့နေရာမှာ ဘာမှ ရှိမနေဘူး။ ပါးလွှာတဲ့ ပင်တီစက အသားနဲ့တပြေးတည်းကပ်ကာနေတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ကိုင်မိတဲ့ပင်တီဟာ Wacoal လား ဘာလား မသိချင်တော့ပါဘူး။ တော်ကြာနေ ဆရာမတစ်ယောက်က အဲဒါ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ဝင်ပြောနေဦးမယ်။ သေချာတာကတော့ ဒါဟာ ဗစ်တိုးရီးယားသောက်တဲ့ စီးကရက်တော့ ဖြစ်မနေနိုင်ပါဘူး .. အ ဟီး။ နူးညံ့တဲ့ ပိတ်သားစပေါ်ကို အသာလေး ထိပြီး ခနကိုင်ထားတယ်။ ခေတ်မီတဲ့ ကောင်မလေးပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ထားမှန်း မသိပေမယ့် ပြောင်ချောလေးဆိုတာကို သိနေတယ်။ အသာလေး လက်ကလေးတွေကို ရွရွလေးနဲ့ အောက်ကို ဆင်းလာခဲ့တယ်။ တစက္ကန့်ကို တစ်စင်တီမီတာ နှုန်းလောက်နဲ့များ သွားမိသလား မသိဘူး။ နဲနဲလေး အလယ်မှာ ချိုင့်နေတဲ့နေရာလေးကို ရောက်လို့ ခနရပ်ပြီး အရှိန်တက်မယ် ပြင်လိုက်တယ်။ အဲ .. အဲဒီအချိန်လေးမှာတင် …
“တီး … တောင် … တင် … တင် … “
ရုတ်တရက် မြည်လာတဲ့ ဆောင်းဘောက်စ်က အသံကြောင့် ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် လူချင်းကွာသွားတယ်။ ရင်ထဲမှာလဲ ဒိတ်ခနဲ ခုန်သွားတယ်။ ခိုးစားတဲ့လူတွေ လူမိရင် ဒီလိုမျိုးပဲ ဖြစ်ကြလား မသိဘူး။ အမူအယာ ပျက်ပျက်နဲ့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်မိကြတယ်။
တော်သေးတယ်လို့ ပြောရမယ်။ alarmလိုမျိုး တီးလုံးသံက အရင်ထွက်လာပေမယ့် မီးတွေက လင်းမလာသေးဘူး။ အဲဒါကြောင့် ရွှေမန်းသူလေး သူ့ကိုယ်သူ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြန်လုပ်ဖို့ အချိန်ရသွားတယ်။ အမှန်က အများကြီးတော့ လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ စကတ်ဇစ်ကို ပြန်ဆွဲတင်ယုံပါပဲ။ ပြီးတော့ ရို့ရို့ယဲယဲ ဖြစ်နေတဲ့ သူ့အင်္ကျီစကို ဟိုဆွဲဒီဆွဲပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ မီးလင်းလာတယ်။ မှောင်နေရာက မီးလင်းလာတော့ အိပ်နေသူတွေလဲ အလင်းရောင်ကြောင့် နိုးလာကြတယ်။ သူတို့လဲ ကျနော်တို့လို ဟိုကြည့် ဒီကြည့်ပေါ့။ အဲဒီတော့မှ ကျနော်လဲ ကားမှန်ပြတင်းကနေ အပြင်ကို ကြည့်မိတယ်။ လမ်းရဲ့ ညာဘက်မှာ မီးရောင်စုံ ထွန်းထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေကို မြင်နေရတယ်။ သြော် .. ၁၁၅မိုင် ရောက်လာတာကိုး။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကားရှေ့က တီဗီဟာ ရုတ်တရက်လင်းလာပြီး အသင့်ဖန်တီးထားတဲ့ ခွေတစ်ခွေမှာ ”ညစာ” ဆိုတာကို ပြနေတယ်။ အဲဒီစာတန်းကို တွေ့ပြီး စိတ်ထဲမှာ နဲနဲတောင် တမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ ကတောက် … စားချင်တာ ဒီညစာ မဟုတ်ပါဘူး .. ဟို ညစာ … အင်း … ညစာလေး … မုန့်ပေါင်းလေး နော် ..
ဆိုးတော့ မဆိုးပါဘူး။ အရင်တုန်းက ပဲခူးအကျော်မှာ ရပ်တဲ့ ဆိုင်တွေလို အိမ်သာသွားရတာ အဆင်မပြေတာမျိုး မရှိတော့ဘူး။ အဆင်မြင့် သန့်စင်ခန်းလို့ ပြောထားတဲ့ အတိုင်း တော်တော်လေး သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖြစ်လာပြီ။ ဆိုင်တွေဟာလဲ ခနော်နီခနော်နဲ့ မဟုတ်တော့ဘူး။ သပ်ရပ်သန့်ရှင်းနေတဲ့အပြင် တချို့ဆိုင်တွေဆို လေအေးပေးစက်တောင် တပ်ထားသေးတယ်။ အေးပေါ့လေ။ ကမ္ဘာနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းဖို့ဆိုတော့ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ညအိပ်ချင် အိပ်လို့ရနိုင်တဲ့ တည်းခိုခန်းလေးတွေ ရှိတယ်ဗျ။ အဲဒါလေးတွေ မြင်တော့ ကျနော့်စိတ်ထဲ ဘာသွားတွေးမိလဲ သိလား။ အင်း … မပြောတော့ပါဘူးဗျာ …။
ရွှေခရားကြီးမှာ ထိုင်တော့ ရွှေမန်းသူလေး ပါမလာပါဘူး။ ကားပေါ်က မဆင်းခင် “အကို အရင်သွား .. ကျွန်တော့်ဖာသာ ကျွန်တော် ထိုင်မယ် “ ဆိုတာ ပြောလိုက်လို့ ကျနော် မခေါ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ သူမကို အတူထိုင်ဖို့ခေါ်ရန် ဆွံ့အသလိုမျိုး ဖြစ်နေတာကြောင့်လဲ ခင်သန်းနုလေး ပြောတာကို မငြင်းလိုက်မိတာပါ။ ဒါတောင်မှ စိတ်ထဲမတင်မကျနဲ့ ထရခက်နေသေးတယ်။ လူတော်တော်များများ ဆင်းပြုသွားတော့မှ ကျနော်က ကားပေါ်က ဆင်းလာမိလို့ အဖေက “ဘာဖြစ်လို့ ကြာနေရတာလဲ“ လို့ မေးနေသေးတယ်။ ကြာမှာပေါ့။ ကျနော်က ခင်သန်းနုလေးနားက မခွာရက်နိုင်သလို ဘောင်းဘီကြားမှာ ဖောင်းဖောင်းကြီး ဖြစ်နေတဲ့ ကောင် အရှိန်ကျသွားတာကိုလဲ စောင့်နေရတာလေ။
ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီးတော့ သပ်ရပ်တဲ့ ကျွန်းစားပွဲလေးတွေမှာ ဝင်ထိုင်တဲ့ အထိတောင် ရွှေမန်းသူလေးကို အရိပ်အယောင်တောင် မမြင်ရသေးဘူး။ ကားပေါ်ကရော ဆင်းရော ဆင်းရဲ့လား။ ဒါတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ သူတို့ ဟိုင်းဝေးအိတ်စပရက်စ်ကားတွေ ထုံးစံက ကားရပ်နားလျှင် တစ်ယောက်မကျန် ဆင်းရတာပဲ။ ကြည့်ရတာ သန့်စင်ခန်းထဲမှာ ကြာနေတာ ထင်တယ်။ ကြာစရာကလဲ အကြောင်း ရှိတယ်လေ။ ကားပေါ်က မဆင်းခင် အဖြစ်ကို ပြန်စဉ်းစားမိလို့ ကျနော့် မျက်နှာက ပြုံးယောင်သမ်းသွားတယ်။ ဝိတ်လျှော့လိုက်လို့ ငြိမ်ကျသွားတဲ့ အငယ်ကောင်ကတောင် ပြန်ထောင်လာချင်သလို ဖြစ်တယ်။
“အကို .. ဘာမှာမှာလဲ …“
လူနားကို ကပ်ပြီး မေးလိုက်တဲ့ စားပွဲထိုးကောင်လေး အသံကြောင့် အတွေးမြင်ကွင်းက တပိုင်းတစနဲ့ ရပ်သွားတယ်။ ဆက်မတွေးတော့ပဲ ဘာစားရမလဲ စဉ်းစားလိုက်တယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကြောင့် ရင်ထဲတမျိုး ဖြစ်နေလို့ ဆာတောင်မဆာပါဘူး။ ညအိပ်မရမှာနဲ့ မထူးတော့ဘူးဆိုပြီး ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ ပဲနံပြားတစ်ပွဲသာ မှာလိုက်တယ်။ အဖေနဲ့ အမေလဲ ဒါပဲစားမယ်ဆိုလို့ အတူတူမှာပေးလိုက်ရတယ်။
ကျနော်တို့ မှာလိုက်တာတွေ ရောက်လာသည့်တိုင် ရွှေမန်းသူလေးကို မတွေ့သေးဘူး။ ကြည့်ရတာ တခြားဆိုင်မှာများ သွားထိုင်တာလား မသိဘူး။ ဒီမှာက ဆိုင်တွေက ကပ်နေတာဆိုတော့ ကားက ဒီဆိုင်မှာ ရပ်ပေမယ့် ကိုယ်က တခြားဆိုင်မှာလဲ သွားထိုင်လို့ရတယ်လေ။ အရင်တုန်းကလို ကားထိုးရပ်ထားတဲ့ ဆိုင်မှာပဲ စားရမယ်လို့ မရှိတော့ဘူး။ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိတဲ့သဘောပါ။ ဒါကလဲ တိုးတက်လာတဲ့ အချက်ထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်လေ။
ပူပူနွေးနွေးနဲ့ စားရတဲ့ ပဲနံပြားဟာ အရသာရှိပါတယ်။ ဆိုဒါများများနဲ့ ပြုတ်ထားတာ မဟုတ်တဲ့ ပဲပြုတ်ဝါဝါလေးတွေဟာလဲ နူးညံ့နေပြီး ရန်ကုန်မှာရတဲ့ ပဲပြုတ်ထက်ပိုကောင်းပါတယ်။ ခါတိုင်းဆို ညဘက် အစာမစားတတ်တဲ့ အမေတောင်မှ ပဲနံပြားကို တစ်ချပ်လုံး ကုန်အောင် စားတာ တွေ့ရတယ်။ စားပြီးလို့ အေးမြနေတဲ့ ညရဲ့လေပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့ ရေနွေးပူပူလေး တစ်ခွက်စီ သောက်ကြတယ်။ ကောက်ညှင်းနံ့ သင်းသင်းလေး မွှေးနေတဲ့ ရေနွေးကလဲ သောက်လို့ ကောင်းတာပါပဲ။ စလုံးမှာ ရတဲ့ green tea ထက်တောင် ကောင်းနေသေးတယ်။
ပိုက်ဆံရှင်း လက်သုတ်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ မိသားစု ကားရပ်တဲ့ နားကို ပြန်လျှောက်လာခဲ့တယ်။ အံကိုက်လို့ ဆိုရမယ်။ ကျနော်တို့လဲ ရောက်ရော စံပယ်ယာလေးက တံခါးကို ပြန်ဖွင့်ပေးလို့ ကားပေါ်တက်ခွင့်ရတယ်။ အဲ …တစ်ခုပြောရဦးမယ်။ ကားပေါ်တက်ခါနီးမှ အနားနားကို သစ်သားဗန်းလေး လည်ပင်းမှာဆွဲထားတဲ့ ဈေးရောင်းတဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။ “အကိုကြီး မဝယ်တော့ဘူးလားတဲ့ ..“။ လှမ်းကြည့်တော့ သစ်သားဗန်းလေးရဲ့အောက်မှာ ဆဌမတန်းဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဖတ်စာ စာအုပ်တွေ့တယ်။ ဗလာစာအုပ်လေး တစ်အုပ်လဲ တွေ့တယ်။ ဝတ်ထားတာကလဲ ကျောင်းစိမ်းထမိန်လေး။ ကျနော့်ရင်ထဲ မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆို ကျနော် ဆီးထုပ်တို့ အချဉ်ထုပ်တို့ကို စိတ်မဝင်စားပေမယ့် အခုတော့ လှည့်ထွက်မသွားရက်ဘူး။ အမေတို့ ကားပေါ်တက်သွားပေမယ့် လိုက်မသွားဖြစ်သေးပဲ ကျနော် ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက ပိုက်ဆံအိတ်ကို ထုတ်ပြီး နေကြာစေ့ နှစ်ထုပ် ဝယ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပြန်အမ်းဖို့ ပိုက်ဆံရှာနေတဲ့ ကလေးမလေးကို မအမ်းနဲတော့လို့ ပြောပြီး လူရှင်းစပြုနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကားတံခါးပေါက်နားကို သွက်သွက် လျှောက်လာခဲ့တယ်။ ကလေးတွေများ ညမအိပ်ပဲ ဈေးရောင်းနေရရှာတယ်။ ဒီလိုဘဝတွေကနေ ပညာတတ်ပြီး လွတ်မြောက်ကြပါစေကွယ် …။
ကျနော့် ရှေ့က တက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လို့ ကြည့်မိတော့မှ ရင်ပြန်ခုန်သွားတယ်။ ရွှေမန်းသူလေးလေ…။ ဘယ်အချိန်က ကျနော့်ဘေးက ဖြတ်သွားလဲ မသိဘူး။ ကျနော်က မုန့်ပဲသွားရည်စာရောင်းတဲ့ ကောင်မလေးဆီက မုန့်ဝယ်နေလို့ သူမဖြတ်သွားတာ မမြင်လိုက်တာ ဖြစ်မယ်။ နဲနဲလေး မြင့်တဲ့ နှစ်ဆင့် လှေကားကို တက်နေတာ ကျနော် ကားအောက်ကနေ ရပ်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ အံမယ်။ ကျနော်တင်မကဘူး။ ကားပေါ်ရောက်နေတဲ့ ဒရိုင်ဘာဘဲကြီးကလဲ ခင်သန်းနုလေးကို ရှိုးနေတာဗျ။ ဟဲ .. ဟဲ။ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ သူ ငိုက်နေရင်တောင်မှ နဲနဲ မျက်စိကျယ်သွားတော့ပေါ့။ ဒီပြင်ဆို ကားမောင်းရင်း ငိုက်သွားရင် ဒုက္ခ မဟုတ်လား။
သူမကားပေါ်ရောက်သွားမှ ကျနော် လိုက်တက်လာခဲ့တယ်။ မလှမ်းမကမ်းမှာ သွားနေတဲ့ ရွှေမန်းသူလေးရဲ့နောက်ကျောကို ကြည့်ပြီး အခုမှ သတိထားမိတယ်။ သူမခေါင်းမစည်းထားတော့ဘူး။ ခေါင်းစည်းလေးကို သူမလက်မှာ ပတ်ပြီး ချည်ထားသလိုလို ကိုင်ထားသလိုလို ဆုပ်ထားတာ တွေ့တယ်။ ပုခုံးကျော်ယုံသာသာ ရှည်တဲ့ ဆံပင်လေးတွေဟာ ပုံစံသွင်းထားတဲ့အတိုင်း ခပ်ဝဲဝဲလေး ဖြန့်ကာ ကျနေရှာတယ်။ ပြည့်ဖြိုးအချိုးကျတဲ့ သူမပုံစံနဲ့ အင်မတန်မှ လိုက်ဖက်လှပါတယ်။
ကျနော် ကြည့်နေချိန်မှာပဲ သူမက ခုံနံပါတ် ၂၅ ၂၆ ကို ရောက်သွားပြီ။ သူမဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အရှေ့ဘက်ကို မျက်နှာမူလိုက်လို့ သူမနောက်မှ ကျနော် ကပ်ပါလာတယ်ဆိုတာ တွေ့သွားတယ်။ ဘာစကားမှ မဆိုပေမယ့် အပြုံးလေးတော့ ဖန်တီးပေးရှာသား။ ကျနော်လဲ ပြန်ပြုံးပြလိုက်ရင်း ဒါဆိုရင်တော့ အခြေအနေ မဆိုးသေးဘူးဟလို့ တွေးနေမိတယ်။ ကြည့်ရတာ ငါ့ညစာဟာ ပဲနံပြားနဲ့တင် ပြီးသွားတာ မဖြစ်လောက်သေးဘူး။
ကျနော်တို့ ထိုင်ပြီးပြီးချင်းပဲ ကားက စထွက်တယ်။ ရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်လမ်းပေါ်ရောက်တာနဲ့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ မီးတွေလဲ ပြန်ပိတ်သွားတယ်။ ကားတစ်စီးလုံး အစောက အခြေအနေကို ပြန်ရောက်သွားတယ်။ တချို့လူတွေ ထိုင်ခုံတွေကို မတ်ထားရကနေ နောက်ဘက် ပြန်လျှောချနေပြီ။ ကျနော်လဲ အပြင်ဘက်ကို ငေးနေတဲ့ ခင်သန်းနုလေးကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုမျိုး ဇာတ်လမ်းပြန်ဆက်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေတယ်။ ကိုယ့်အဖြစ်ကိုလဲ ကိုယ်မယုံနိုင်သေးဘူး။
ဒီလောက်လှတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် … နောက်ပြီး ဒီညနေမှ တွေ့တာကို နမ်းပြီး ဟိုဟာထိရောက်အောင် နှိုက်လိုက်ရတာဆိုတာ ပုံပြင်ထဲမှာတောင် ရှိနိုင်ဦးမှာ မဟုတ်သေးဘူး။ အင်း … ဒါပေမယ့် အခုခက်နေတာက အဲဒီ ဇာတ်လမ်းကို ဘယ်လို ပြန်စရမလဲ ဆိုတာ။ လာ .. နင်နဲ့ ငါနဲ့ ပြန်နမ်းကြစို့လို့ .. ပြောလို့လဲ မဖြစ်သေးဘူး။ ဘယ်လို အကြောင်းအရာနဲ့စရပါ့မလဲ …။
ကျနော် အကြံတစ်ခု ရသွားတယ်။ ရှေ့ခုံနောက်ကျောက အိတ်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ နေကြာစေ့ထုပ်ကို ယူလိုက်တယ်။ လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့ အပြင် အသံတွေက တိတ်နေလို့ ကျိုးကျိုးကျွတ်ကျွတ် အသံတော့ နဲနဲထွက်သွားတယ်။ ရွှေမန်းသူလေ လမ်းမဘက်မငေးတော့ပဲ ကျနော့်ဘက်လှည့်လာတာ တွေ့တယ်။ လက်ထဲရောက်လာတဲ့ နေကြာစေ့ထုတ်ကို ဖောက်ဖို့ အရာပေးထားတဲ့နေရာကနေ ဆွဲဖြဲလိုက်တယ်။
“နေကြာစေ့ စားပါဦး .. ညီမ …“
ကျနော့်ဆီက ထွက်သွားတဲ့ အသံမှာ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြင်နာတဲ့ အငွေ့အသက်တွေ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ကိုယ်က မေတ္တာထားမှ သူက မေတ္တာပြန်ထားမှာ မဟုတ်လား။ မေတ္တာတရားဆိုတာ လက်ကိုင်ထားသင့်တဲ့ အရာပဲလေ။
ရွှေမန်းသူလေးရဲ့လက်ဖဝါလေးက ဖြန့်ပြီး ကျနော့်ဘက်လှည့်လာတယ်။ ဒီလောက် အခြေအနေ ဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုဆက်ကရမယ်ဆိုတာ ကျနော်သိသွားပြီ။ လက်ကို တမင်တကာဆွဲယူလိုက်ပြီး လက်ဖဝါးလေးပေါ် နေကြာစေ့လေးတွေ သွန်ချပေးလိုက်တယ်။ အကြံနဲ့မို့ တခါထဲ သိပ်အများကြီးမပေးလိုက်ဘူး။ မြန်မြန်ကုန်သွားမှ သူက လာထပ်တောင်းမှာ မှတ်လား။ အဲဒါဆို နောက်ထပ်တစ်ခါ လက်ကိုင်ခွင့်ရမယ်လေ။ လက်ကနေတဆင့် ကျန်တာတွေ ပြန်ကိုင်လို့ရအောင် လုပ်ရမယ် မဟုတ်လား။ လက်ပြန်ကိုင်ခွင့်ရဖို့ကလဲ သေချာပါတယ်။ မိန်းကလေးဆိုတာ ၁၀၀ မှာ ၉၉ ယောက်က နေကြာစေ့ ကြိုက်ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ စားမိရင် ဆယ့်စေ့ ဆယ်ငါးစေ့လောက်နဲ့ ဘယ်သူရပ်နိုင်လို့လဲ … အ ဟီး …။
ကျွန်တော် တွက်ထားတဲ့ အတိုင်းဖြစ်လာပါတယ်။ ခင်သန်းနုလေးက သူမလက်ထဲကဟာ ကုန်သွားရော နောက်ထပ် လက်ဝါးဖြန့်ပြီးတောင်းတယ်လေ။ သိတယ်မှတ်လား။ ကျနော်က တမင်တာကာ လက်ဖဝါးလေးကို အကြာကြီးကိုင်ပြီး တစ်စေ့ချင်းနီးပါး အချိန်ယူ သွန်ချပေးလိုက်တာ။ အဲဒီမှာ ရွှေမန်းသူ ကျနော့်အကြံကို ရိပ်မိသွားရှာရောဗျာ …။ ဆယ့်စေ့ကျော်ကျော်လောက် လက်ထဲရောက်သွားချိန်မှာ “ဟွန့်“ ဆိုတဲ့ အသံပြုပြီး လက်ပြန်ရုတ်သွားတယ်။ နေကြာစေ့ကို ကိုက်ခွာစားရင်း ကိုယ်ကိုတစောင်းလှည့်ပြီး ကျနော့်ကို ကျောခိုင်းထားတယ်။ ဒါပေမယ့် စောင်းစောင်းလေး မြင်နေရတဲ့ သူမရဲ့ပါးပြင်တစ်ဖက်က ချိုင့်သလိုလို အခွက်လေးပေါ်နေလို့ ပြုံးနေတယ်ဆိုတာ ကျနော် ရိပ်မိတယ်လေ။ ဒါ အိုကေ စိုပြည်ပြီဆိုတဲ့ အချက်ပဲ။
ဘယ်ရမလဲ .. မသိမသာလေး ကိုယ်ကို သူမဘက်တိုးပြီး အသားချင်းထိအောင် ကပ်ပစ်လိုက်တယ်။ အလိုက်သင့်ပါပဲ။ အိခနဲ ကိုယ်ချင်းနှစ်ခုထိသွားတဲ့ အချိန်မှာ ခင်သန်းနုလေးကိုယ်က တောင့်တောင့်လေး ဖြစ်နေရာက ပျော့ကျလာပါရော။ ကျနော့်ဘက်ကို မှီလျက်သားလေးပေါ့။ ကျနော်လဲ ဒီတစ်ခါတော့ ဘယ်ဘက်လက်ကိုပါ အလကားမထားတော့ပဲ အလုပ်ပေးလိုက်တယ်။ သူမနောက်ကျောကနေ ဝိုက်ကာကျော်ပြီး ဘယ်ဘက်ပုခုံးလေးပေါ် တင်လိုက်တာပါ။ သာသာလေး ဖက်လိုက်တဲ့ သဘော့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပိုင်ပိုင်နိုင်ရှိပါတယ်။ ရွှေမန်းသူလေးရဲ့နူးညံ့အိထွေးတဲ့ ကိုယ်လေးဟာ ကျနော့်ရင်ခွင်တခြမ်းကို ပြန်ရောက်သွားရှာတယ်။ အခြေအနေကောင်းနေပြီမို့ ကျနော် ကျန်နေတဲ့ ညာဘက်လက်ကို သူမပေါင်ပေါ် ခပ်မြန်မြန်ပဲ ပြန်တင်လိုက်တယ်။
“အကို … နေဦးဗျ…“
ရွှေမန်းသူလေးက ဆတ်ခနဲ ပြန်ရုန်းထွက်သွားတယ်။ ကျနော် သူမကို ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ ကြည့်နေမိတယ်။ ကျနော်များ အဆင့်ကျော်သွားတာလားလို့။
“ဘေးကို ကြည့်ဦး ဗျ … ကျွန်တော်တို့ကို မြင်သွားဦးမယ် …“
ကျနော်လဲ အဲဒီတော့မှ ပြန်သတိရတယ်။ ဟုတ်သားပဲ။ ငါရောက်နေတာ လူသူလေးပါးကင်းရှင်းတဲ့ ပန်းခြံမှ မဟုတ်တာ။ အိတ်စပရက်စ်ကားကြီးပေါ်ပဲလေ။ သူမပြောသလို ဘေးဘီကိုငှဲ့ကြည့်တော့ ဟိုဘက်လမ်းက ဘွားတော်ကတော့ အိပ်ပျော်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် နောက်နားကလူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်က မအိပ်သေးတာ တွေ့တယ်။ အင်း .. ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ။ ကျနော်တို့က ပေါ်တင်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော့် မျက်ဝန်းထောင့်မှာ ရွှေမန်းသူလေးက လက်ပိုက်လိုက်တာ တွေ့တယ်။ ကျနော် သူမဘက်လှည့်ကြည့်တဲ့ အချိန်မှာ ပိုက်ထားတဲ့ လက်ဖဝါးလေးနှစ်ဖက်က လက်မောင်းသားလေးတွေကို အပြန်အလှန် ပွတ်ပေးနေတယ်။ ဒါကို မြင်တော့ ကျနော် အကြံကောင်းတစ်ချက် ရသွားရော ..
“ချမ်းလို့လား … ညီမ ..“
“ဟုတ်တယ် … အကို .. အရမ်းအေးလာတယ်ဗျ .. ကျွန်တော့်ဆီမှာလဲ ဘာမှမပါဘူး … “
“ဟုတ်လား .. အကို့ဆီမှာ စောင်ပါတယ် .. ခနလေး အကို ထုတ်ပေးမယ် …“
ကျနော် ချက်ချင်းပဲ မတ်တပ်ထရပ်ပြီး ခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ စင်ထဲထည့်ထားတဲ့ ကျနော့် အဝတ်အိတ်ကို ယူလိုက်တာ။ အမေထည့်ပေးထားတဲ့ စောင်ကို ရှာတာပါ။ ကျနော့်ဖာသာ ကျနော်ဆို ဒီစောင်ကို ခြုံဖြစ်မှာတောင် မဟုတ်ဘူး။ အခုတော့ ခြုံစရာအကြောင်းက ပေါ်လာပြီလေ။
စောင်ရရချင်းပဲ ကျနော် သွက်သွက်လက် ဖြန့်လိုက်တယ်။ မဆိုးပါဘူး။ ကိုရီးယားစောင်ဆိုပေမယ့် အမေဝယ်ထားတာ သိပ်အသေးလေးမဟုတ်လို့ နှစ်ယောက်စာတောင် လုံလုံခြုံခြုံရှိနိုင်တယ်လို့ ပြောရမယ်။ ကျနော်က ဒီဘက်က အစကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာ သူမက ဟိုဘက်က အစကိုဆွဲပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ်လွှမ်းလိုက်တယ်။ အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြည့်မိကြတယ်။ ပြီးတော့ တိုင်ပင်ထားတာ မဟုတ်ပဲ ပြုံးမိကြသေးတယ်။ ရှင်းပြစရာမလိုတဲ့ အနက်တစ်ခုကို ဆောင်တဲ့ အပြုံးပါ။ ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက မောင်နှမတွေ အမေမသိအောင် ကြောင်အိမ်ထဲကမုန့်ကို ခိုးစားတုန်းက အချင်းချင်း ပြုံးပြတဲ့ အပြုံးမျိုးလိုပေါ့ … အင်း .. အခုလဲ ခိုးစားရတာပဲ မဟုတ်လား။
ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာ ယုံတမ်းစကားမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်နဲ့ ရွှေမန်းသူလေးက သက်သေခံနေတယ်လေ။ ကိုရီးယားစောင်ကို နှစ်ယောက်သား ခေါင်းလေးကိုယ်စီသာ ပေါ်တဲ့အထိ ခြုံပြီးတာနဲ့ သူမက ကျနော့်ပုခုံးပေါ် ပြန်မှီလာသလို ကျနော်ကလဲ သူမကိုယ်ကို တင်းတင်းလေး ပြန်ဖက်ထားလိုက်တယ်။ ဟုတ်တော့ဟုတ်နေပါပြီ။ ကျနော့်ကို ဒီလောက်ထိ အခွင့်အရေးပေးတဲ့ သူမကိုလဲ အံ့သြမိတယ်။ တကယ်ဆို သူနဲ့ ကျနော်နဲ့က တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိကြတာမဟုတ်။ သူ့မှာပိုင်ဆိုင်သူ ရှိတာလား။ နောက်ကြောင်း ရှင်းရဲ့လား။ ကျနော် ဘာတစ်ခုမှ မသိပါဘူး။ ယုတ်စွအဆုံး နာမည်တောင် မေးကြည့်ရသေးတာ မဟုတ်ဘူး။ အခုလိုမျိုး ကျနော့်ကို လိုက်လျောတာ အကြောင်းတစ်ခုခုများ ရှိနေလို့လား၊ စိတ်ညစ်လာသူလား။ အဝတ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ အိမ်က ဆင်းလာတာများလား။ ဟူး ….ဘာလေးမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး။
စိတ်က ဟိုဟိုဒီဒီတွေးပြီး ကျနော့်ကိုမှီထားတဲ့ ရွှေမန်းသူလေး အကြောင်း စပ်စုမိနေချိန်မှာ ကျနော့်ကိုယ်ကလဲ သူမကိုယ်ကို စပ်စုမိနေပြီ။ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ စပ်စုမိတယ် ဆိုပါတော့။ ပုခုံးကို ကျော်ဖက်ထားတဲ့ လက်ဟာ လက်မောင်းသားလေးတွေကို ဇာပါးလေးတွေပေါ်က ပွတ်ပေးနေရင်းကနေ သူမကိုယ်အလယ်ပိုင်းကို အချိန်မဆိုင်းပဲ ကူးသွားတယ်။
ကျနော့် ပုခုံးပေါ် ရောက်နေတဲ့ သူမနှုတ်က မချင့်မရဲသံလေး ထွက်ကျရှာတယ်။ သူမကိုယ် သူမ သတိပြုမိသွားလားတော့ မသိဘူး။နှုတ်ခမ်းလေးကို အောက်သွားလေးနဲ့ ကိုက်ထားပြီး မျက်လုံးလေးတွေ မှိတ်သွားရောဗျာ။ ကျနော်လဲ မို့ထွားတယ်ဆိုပြီး မြင်ခဲ့ရတဲ့ သူမရဲ့ရင်သားတစ်ဖက်ကို တကယ်ဟုတ်လား မဟုတ်လားဆိုတာ သိအောင် အုပ်မိသွားတဲ့ လက်နဲ့ confirm လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဟုတ်ရှာပါတယ်။ ဘရာပျော့ပျော့လေးပေါ်က ကိုင်မိတာတောင် လက်ထဲမှာ စီးခနဲနဲ့ တနင့်တပိုးရှိလှတယ်။ ဘယ်လက်က အလုပ်ဖြစ်သွားပြီမို့ ညာလက်ကို စစ်ကူခေါ်ဖို့ သူမပေါင်ပေါ်တင်လိုက်ပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ တမင်တကာကို အရင်းနားကို ကပ်တင်လိုက်တာပါ။ အဲဒီမှာ ကျနော် တစ်ခု အံ့သြသွားတယ်။
ဟိုက် .. တယ် ဟုတ်ပါလား ..
ခင်သန်းနုလေးလေ .. သူ ပင်တီ ပြန်မဝတ်လာဘူးဗျ။ ဘယ်လိုကောင်မလေးလဲဟ။ ဒီအတိုင်းဆို ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွင် မဟုတ်တော့ပဲ ကြိုတင်ကြံစည်မှု ဖြစ်နေပြီ။ ကားပေါ်ပြန်ရောက်ရင် ဒီလိုပဲ ပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာများ တွက်ထားသလား မသိဘူး။ ကဲ .. ခင်ဗျားတို့ပဲ စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့ဗျာ။ ဒီလောက် အဆင်ပြေနေမှတော့ နောက်ဆုတ်စရာလမ်း မရှိတော့ဘူးမှတ်လား။ ကျနော် တစ်ခွန်းပဲ ဆံနွယ်လေးတွေ ဖုံးနေတဲ့ သူမနားနားကို ကပ်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။ ဘာလဲသိလား။
ရွှေမန်းသူလေး မပွင့်တပွင့်နဲ့ “အင်း“ လို့ ပြန်ဖြေတာတောင် နောက်ကျနေပါပြီ။ ကျနော်လက်က သွက်သွက်လက်နဲ့ကို ဖြုတ်ပြီးနေပြီ။ ပြီးတာနဲ့ တခါထဲ ဟနေတဲ့ အပေါ်ဘက်ကနေ ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ ကျနော့်မှာ အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်။ ခရီးတစ်ခုကို တစ်ခေါက်သာသွား နောက်တစ်ခေါက် အဲဒီနေရာကို လမ်းမမှားပဲ သွားတတ်တယ် .. အ ဟီး။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်က မွေးရာပါ တော်တာ။ အခုလဲကြည့်လေ။ တန်းတန်းမတ်မတ်ကို ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာ ရောက်သွားတယ်။ ပြောင်ချောလေးဆိုတာ ဒီတစ်ခါတော့ ၁၀၀%ကို ကွန်ဖန်းဖြစ်သွားပြီ။
ကားထဲကလူတွေ အိပ်နေတာလား မအိပ်ပဲ အပြင်ကို ငေးနေကြတာလား . .ဘာလား ညာလား ကျနော်မသိတော့ဘူး။ ယုတ်စွအဆုံး အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ကားရှေ့ဘက်မှာ အဖေနဲ့ အမေပါလာတောင် မသိတော့ဘူးဗျာ။ ကာမအမိုက်အမှောင် ဖုံးလျှင် ဘာဆိုဘာမှ မမြင်တော့ဘူးဆိုတာ မှန်တယ်။ တက်ကြွနေတဲ့ စိတ်နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားမိခဲ့ပြီ။
ကြည့်လေ … ပုခုံးပေါ်မီထားတဲ့ ခင်သန်းနုလေးရဲ့မျက်နှာလေး မဲ့တဲ့တဲ့လေး ဖြစ်နေတာကို ကြည့်ပြီး ညာလက်ကို အပီသောင်းကျန်း ဖြစ်လိုက်တယ်။ လူပျိုလက် ဝက်မြီးမှတ်လား .. ကျနော့် ညာလက်ရဲ့ လက်ညိုးနဲ့လက်ခလယ်ဟာ အဲဒီဝက်မြီးလိုပဲ ကွေးလာလိုက် ပြန်ဖြောင့်သွားလိုက် ဖြစ်နေတော့တာ။ ရွှေမန်းသူလေးရဲ့ကိုယ်ဟာ ကျနော့်ကို မှီထားတာတောင် ကတုန်ကရီလေး တဖြေးဖြေးနဲ့ ဖြစ်လာတယ်။ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို အတင်းကိုက်ထားပေမယ့် လူချင်းအရမ်းကပ်နေလို့ ကျနော့်နားထဲမှာတော့ နဲနဲ အရှိန်ရလာတဲ့ တအီအီ အသံလေးတွေ ကြားစပြုလာပြီ။ ရုတ်တရက် ကျနော် ခပ်ဟဟလေး ဖြစ်သွားတယ်လို့ ထင်တဲ့ အဝလေးကို လက်ညိုးလေးကို ကွေးပြီး ထည့်ကြည့်လိုက်တယ်။
ရွှေမန်းသူလေး ကိုယ်က ကော့ခနဲ ဖြစ်သွားတဲ့ အပြင် သူမရဲ့ညာလက်က ကျနော့် ဘယ်ပေါင်ပေါ်ရောက်လာတယ်။ မျက်နှာကိုလဲ အတင်းပဲ ကျနော့်ရဲ့လည်တိုင်နားကို တိုးကပ်ထားလာတယ်။ သူမနှာဝက ထွက်တဲ့လေဟာ ကျနော့်လည်ပင်းကို တိုက်ရိုက်ထိနေလို့ အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်တိုင်း နွေးခနဲ အေးခနဲ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကိုက ကျနော့်အတွက် စိတ်တက်ကြွဖို့ အကြောင်းပဲလေ။ ဘယ်လက်နဲ့ အုပ်ကိုင်ထားတဲ့ နို့လေးတစ်ဖက်ကိုပါ လက်ချောင်းသန်မာရေးလုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလို့ သဘောထားပြီး ဆော့ကစားပေးလိုက်ရော။ သိတယ် မှတ်လား။ တချို့တွေ မြင်ဖူးမှာပါ။ လက်ထဲမှာ စတီးသံလုံးလေး ထည့်ပြီး ဆော့ရတာလေ။ အဲဒီလိုမျိုးပေါ့ …
ခင်သန်းနုလေး ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ကြွလာလဲဆိုတာ ကျနော် ပြောပြမယ်။ ကျနော့်လက်ချောင်းလေးတွေ စိုစိစိုစိ ဖြစ်လာတဲ့ အပြင်ကို ကျနော့်ပေါင်ကို လာညှစ်ထားတဲ့ လက်က ဘယ်ရောက်သွားတယ်ထင်လဲ၊ ဂွကြားကို ရောက်လာတာဗျ။ ကျနော်လဲ အကြိုက်တွေ့သွားတာပေါ့။ ကျနော်ထိုင်နေကြ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့တဲ့ ပေါင်ခွပြီး ထိုင်တဲ့ပုံကိုတော့ ဒီတစ်ခါ အပီအပြင်ကို လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ဘာမှလုပ်ပေးတာ မဟုတ်ပဲ ဂျင်းဘောင်းဘီပေါ်ကနေ အုပ်ကိုင်ထားတာနဲ့တင် ကျနော် စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားနေမိတယ်။
“အကို … မြန်မြန်လေး …“
တော်တော်လေး ကြာလာတော့ ခင်သန်းနုလေး ပြီးတော့မယ်ထင်တယ်။ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ အသံမျိုးနဲ့ တိုးတိုးလေး ကျနော့်နားကို ကပ်ပြောတယ်။ သူတော့ မသိဘူး။ ကျနော်ကတော့ စိတ်တွေ ဟုန်းခနဲကို ထတာပဲ။ အထဲကိုတော်တော်ရောက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ လက်ညိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကို မြန်မြန်လေးအသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ရှေ့ (သို့) နောက်ကလူတွေ တစ်ယောက်ယောက်သာ သေချာနားထောင်ကြည့်မယ်ဆို တဇွိဇွိ မြည်တဲ့ အသံလေးတွေကို ကြားရမှာ။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ ဒါတွေကို သိမနေတော့ဘူး။ ရွှေမန်းသူလေးလဲ ဘယ်လိုမှကို ငြိမ်ငြိမ်မနေတော့ပဲ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်လာသလို ကျနော့်ကောင်ကို ဖိအုပ်ထားတဲ့လက်ကလဲ တင်းတင်းကြီးလာပွတ်နေတယ်။ ကျနော် ခပ်မြန်မြန်လေး ထပ်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ …
ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ ကျနော် ရှင်းမပြတော့ပါဘူး။ သူမပေါင်ကြားနှစ်ဖက်ကို ရုတ်တရက် စိလိုက်သလို ကျနော့်လက်ကိုလဲ သူမဘယ်လက်နဲ့ လာကိုင်ထားတယ်။ ခါးလေးကော့တက်လာသလို ရင်လေးလဲ ကြွတက်သွားတယ်ပေါ့။ အဲ .. ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒါတွေ အပရိကလို့ပဲပြောရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူမပြီးသွားတာကို ကျနော်က တော်တော်ခံလိုက်ရတယ်။ လက်နဲ့အုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ကျနော့်ဟာကို ညှစ်လိုက်တယ်ထင်လုိ့လား။ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဘာဖြစ်တယ်ထင်လဲ။ ကျနော့် လည်ဂုတ်သားကို ကုန်းကိုက်တာဗျ။
အမလေး .. သေပါတော့ဗျာ။
ကျနော့်မှာ ရုတ်တရက် စစ်ခနဲ နာသွားသလို စိတ်လဲထောင်းခနဲ တက်သွားတာ။ ညာလက်က သူ့ပေါင်ကြားမှာ ထုတ်မရပဲ ညပ်နေလို့ ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်လက်ကိုတော့ မထိန်းနိုင်ဘူး။ အားရပါးရကို ညှစ်ပစ်မိတာ။ သူလဲနာ ကိုယ်လဲနာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို နာတာကိုက ခံစားမှုဖီလင်တမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ ငယ်ငယ်တုန်းက အနာဖေးတက်နေတဲ့ ဓါးရှထားတဲ့ အနာကို ခွာလိုက်သမျိုးပဲ။ ခွာလိုက်ရင် သွေးပြန်ထွက်မယ်ဆိုတာ သိနေပေမယ့် မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ကျနော်တို့ ခွာမိကြတယ်လေ။ အင်မတန်မှ ယားတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ခံစားရတာလေ မဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒီလို အနာဖေးကို ခွာလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ စစ်ခနဲ နာကျင်မှု၊ အေးခနဲ ဖြစ်သွားတဲ့ အယားပြေမှု၊ စပ်ခနဲ ဖြစ်လာတဲ့ သွေးထွက်လာမှု အဲဒါတွေမျိုးရဲ့အကြီးစား ဖီလင်တစ်ခု ဖြစ်တာဗျာ။ လူကို ထူပူဖိန်းရှိန်းသွားတာပဲ …
ကျနော် အချိန်လဲ မှတ်မထား .. နာရီလဲ မကြည့်နိုင်လို့ ဘယ်လောက်ကြာသွားတယ် မသိဘူးဗျာ။ ခင်သန်းနုလေး အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှူထုတ်နေမှုနဲ့အတူ သူ့မျက်နှာလေး ကျနော့်လည်တိုင်ကနေ ပြန်ခွာသွားမှ အသိစိတ် ပြန်ဝင်လာတယ်။ ကျနော့်ညာလက်ကို နှုတ်ဖို့ ပြန်ထုတ်လိုက်တော့ သူမလဲ အဲဒီတော့မှ သတိပြန်ရတယ် တူတယ်။ လိမ်ကပ်နေအောင် စေ့ထားတဲ့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ပြန်ခွာပေးရှာတယ်။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကြည့်မိကြတယ်။ ခင်သန်းနုလေးက အပြုံးလို့ခေါ်ဆိုလို့ မရနိုင်တဲ့အမူအယာနဲ့ နွမ်းလျလျလေး ကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့မှ တစ်ခုခုကို သတိရသွားဟန်နဲ ….
“အကို .. ကျွန်တော် ကိုက်လိုက်တာ .. အရမ်းနာသွားလား …“
“အာ .. ရပါတယ် … ကျနော်လဲ အရမ်းညှစ်မိလိုက်တယ် … အ ဟင်း .. အ ဟင်း …“
“ခစ် … ဟုတ်တယ် … ကျွန်တော်လဲ အဲဒါကြောင့် ပြန်မလွှတ်မိတာ … “
“ရေသောက်ဦး မလား …“
“သောက်မယ်ဗျ … ဒါနဲ့ အကို့လက် ..ရော့ ..“
“အာ .. မလုပ်ပါနဲ့ .. ခေါင်းစည်းကြီး မဟုတ်လား …စောင်နဲ့ပဲ လုပ်လိုက်တော့မယ်“
“အယ် .. . စောင်က ဘယ်နားရောက်နေလဲ ဆိုတာလဲ ကြည့်ဦး ..ခစ် …ခစ် “
“ဟုတ်ပါ့ဗျာ … ဟား ဟား …“
ကျနော် သဘောကျစွာ သူမနဲ့အတူလိုက်ရယ်တော့ မျက်စောင်းထိုးတယ်။ ရယ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာနဲ့ ဘာမှ မပြောတော့ပဲ ရေပုလင်းကို ထုတ်ပြီး မော့သောက်နေတယ်။ ဟုတ်သားပဲ။ ကျနော်တို့က ကိုယ့်ဇောနဲ့ ကိုယ်မျောနေလို့။ ကိုရီးယားစောင်က ကိုယ်တွေပေါ်မှာ ရှိနေတာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဘယ်အချိန်က အောက်ကိုလျှောကျပြီး ပေါင်ပေါ်မှာ လာပုံနေလဲတောင် မသိဘူး။ အဖြစ်ကတော့ မနှစ်ကနဲ့ကို မတူတော့ဘူး ဗျာ…. ။
ဒီတစ်ခေါက် တစ်ခုတော့ ထူးတယ်ဗျ။ ခါတိုင်း နေပြည်တော်ကို ဖြတ်ပြီဆိုရင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ ကားပေါ်ကလူတွေ ဆင်းပေးရတယ်။ ကိုယ့်မှတ်ပုံတင်လေးတွေ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ကိုင်ပြီး အိပ်ရေးပျက်ခံ လမ်းလျှောက်ရတာလေ။ အခု ဒီတစ်ခေါက်တော့ အဲဒါမျိုး မလုပ်ရဘူး။ ဒီအတိုင်းလေးပဲ ဖြတ်မောင်းသွားတယ်။ ဒါတောင်မှ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ၂၄နာရီ မီးအမှန်ဆုံးနေရာကို ရောက်တာမို့ တချို့လူတွေက လျှပ်စစ်မီး မမြင်ဘူးသလို ထကြည့်နေကြသေးတယ်။ သြော် .. သူတို့ကိုလဲ အပြစ်မဆိုရက်ပါဘူးလေ …။
ဒါပေမယ့် ကျနော့်အတွက် နဲနဲတော့ ဘုသွားစရာ ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ့်နှယ့်။ ကျနော်က နောက်တစ်ဆင့်များ တက်လို့ရမလားလို့ ကြံနေတာ။ အခုတော့ လူတွေဆီက တီးတိုးတီးတိုး စကားသံတွေလဲ ကြားရာ ခင်သန်းနုလေးက ဖတ်ခနဲ ဟိုဘက်ကို ပြန်ကပ်သွားရှာရော။ ပိုဆိုးတာက ဖင်လေးကိုတောင် ကြွပြီး သူ့ဟာသူ စကတ်ထမိန်ကို နေသားတကျဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်နေတယ်ဗျာ။ စိတ်တော်တော်ညစ်သွားတယ်။ သွားပြီပေါ့။ မိန်းကလေးဆိုတာမျိုးက ကျနော်တို့လို မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ စိတ်ကျေနပ်သွားရင် တော်ယုံတန်ယုံနဲ့ စိတ်ပြန်လာကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ …။
နေပြည်တော်က ထွက်လာတာ နဲနဲကြာမှ ကားပေါ်က တီးတိုးအသံတွေ ပြန်လျော့သွားတယ်။ ပြန်အိပ်ကြတာ ဖြစ်ရမယ်။ ကျနော်လဲ ဘေးဘီကို အရိပ်အခြေကြည့်လိုက်ပြီး သိသိသာသာကြီးပဲ ရွှေမန်းသူလေးဘက်တိုးသွားတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူမပုခုံးလေးတစ်ဖက်ကို ကိုယ့်ပုခုံးနဲ့ ထိသွားပါရော။ မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ မြင်းကမလှုပ်တော့ ခုံကပဲ လှုပ်ရမယ် မှတ်လား …။
“အိပ်မပျော်ဘူးလား .. ညီမ …“
ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ကို မျက်နှာလှည့်ထားတဲ့ ခင်သန်းနုလေးကို ကပ်တိုးလေး မေးလိုက်တယ်။ သူမက ကျနော့်ဘက်ကိုတော့ လှည့်မလာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် “အင်း“လို့ မပွင့်တပွင့်လေးပြောရင်း ကိုယ်လေးက ပြန်ယိုင်ကျလာတယ်ဗျ။ ရင်ထဲမှာ အတိုင်းမသိကို ပျော်သွားတာ။ အပေါ်ပိုင်းမှာ ပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ ကြောင်အိမ်သွားအဖွင့်မှာ ဆီပြန်ပုဇွန်ထုပ်ပန်းကန်ကြီးကို အဆင့်သင့် တွေ့လိုက်သလိုမျိုးလေ။ တကယ်တမ်း ပြောရရင် ခင်သန်းနုလေးဆိုတာကလဲ ကျနော့်ပုဇွန်ထုပ်မလေး မဟုတ်လား။
ဒီတစ်ခါတော့ ဘယ်ဘက်လက်ကို ပုခုံးပေါ် ပြန်မတင်တော့ပါဘူး။ ကျနော် နည်းပညာပြောင်းလိုက်တယ်။ အသာလေးပဲ သိုင်းဖက်ထားပြီ သူမရဲ့တင်းရင်းနေတဲ့ တင်ပါးလေးကို မရွတရွလေး သွားပွတ်နေတယ်။ အစောပိုင်းတုန်းက ယားကျိယားကျိ လုပ်မနေနဲ့ မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောထားတာလေးကို သတိရလို့ တမင်တကာလုပ်လိုက်တာ။ ကျနော့် နည်းစနစ် မှန်တယ်လို့ပဲ ဆိုရမယ်။ ကျနော့် ပုခုံးကို မှီထားသလို ဖြစ်နေရာက သူမက ကျနော့် မျက်နှာကို မော်ကြည့်ပြီး …
“အကို … ပုခုံးက နာနေသေးလား …“
“မနာတော့ပါဘူး … ဒါပေမယ့် .. နေရထိုင်ရ ခက်နေတယ် ..“
“ဟိုလေ … ပုခုံးက မဟုတ်ဘူး … သိတယ်မှတ်လား … ဟိုနေရာကလေ ..“
“သြော် … ဒါလား … ခစ် ..“
ကျနော် ဖင်တောင် ဆိုဖာပေါ်က ကြွသွားမလို ဖြစ်တယ်။ “ဒါလား“ ဆိုတာကို ပါးစပ်နဲ့တင် မေးတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ လက်ကပါ ရောက်သွားတာ။ ကျနော်လဲ ဟန်ကျပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် ခက်နေတာက အခုမှတွေ့တဲ့ သူစိမ်းမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းရမလဲ။ အတင်းကြီး ငါ့ ဟိုဟာလုပ်ပေးဆိုပြီး ပြောလို့မရဘူးလေ။ ဒါမျိုးဆိုတာ ဇာတ်လမ်းထဲမှာပဲ ဖြစ်တာ။ အပြင်မှာက မလွယ်ဘူးလေ။ နောက်ဆုံး စဉ်းစားရင်း ငါးကြင်းဆီနဲ့ပဲ ငါးကြင်းပြန်ကြော်ရမယ်လို့ တွေးမိပြီး ..
“ရွစိရွစိတော့ မလုပ်နဲ့ ညီမရယ် … အကို မနေတတ်ဘူး .. ဟင်း .. ဟင်း …“
“ခစ် ..ခစ် …. ခင်ဗျားနော် …. တကယ်ပဲ ..“
ခင်သန်းနုလေးက သူမခေါင်းကို တွန်းပြီး ကျနော့်ကို ညုတုတုလေးပြောတယ်။ ရင်ပတ်ကို ခေါင်းနဲ့ခွေ့သလိုမျိုးပါ။ အဲဒီမှာ ကျနော်က ဆံနွယ်လေးတွေ ဖုံးနေတဲ့ နဖူးပြင်လေးကို အသာလေး နမ်းပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီလိုလဲ ဖြစ်ရော သူမက ကျနော့်ကို အဓိပ္ပါယ်တမျိုးဆောင်တဲ့ အကြည့်နဲ့ကြည့်တာဗျ။ ဆောင်းရာသီရဲ့နံနက်ခင်း နေမထွက်တဲ့ မြင်ကွင်းလို သူမအကြည့်တွေက ရီဝေဝါးဝါးလေးလေ …။
“အကို ဘေးကို ကြည့်ထား … နောက်ပြီး ချောင်းလဲ မကြည့်နဲ့နော် … ချောင်းကြည့်ရင် ကျွန်တော် မလုပ်ပေးတော့ဘူး ..“
“ဟုတ် … မကြည့်ဘူး … စိတ်ချ …“
ဘာလုပ်ပေးမှန်း မသိပေမယ့် ကျနော် ရဲရဲကြီးကို ကတိပေးလိုက်တယ်။ သေချာတာကတော့ တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်မယ်ဆိုတာပဲ။ စိတ်ထဲမှာတော့ သူလုပ်ပေးမှာ ဟိုဟာလား ဒီဟာလားဆိုပြီး ကြိုတင်ရင်ခုန်နေတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်မှာ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်ဖမ်းရတဲ့ ဂိုးသမားထက်တောင် ကျနော် ပိုရင်ခုန်မိမလား မသိဘူး။ ဘယ်ဘက်ထောင့်ကများ ဝင်လာမလဲ မသိဘူးဗျာ …။
ခင်သန်းနုလေးက ကိုယ်ကို ကိုင်းလိုက်တယ်။ ဒီလိုကိစ္စဆိုတာ ကိုယ်က အလိုက်သိရမယ်မှန်းသိလို့ ကျနော် ခြေထောက်ကို ဆန့်ပြီး ခပ်လျှောလျှောလေး နေပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူမက ကိုရီးယားစောင်ကို ကောက်မပြီး ခေါင်းပေါ် လွှမ်းခြုံလိုက်တယ်။ ကျနော့် မြင်ကွင်းကနေ သူမ မျက်နှာလေး ပျောက်သွားတယ်။ စောင်အောက်မှ ခုံးခုံးကြီး ဖြစ်သွားရော။ ကျနော်လဲ သူမအတွက် အဆင်ပြေအောင် ဘေးလူတွေလဲ မရိပ်မိအောင် စောင်စကို လက်နဲ့ဆွဲပြီး မပေးထားတယ်။ အရေးထဲ ကိုယ့်အဖြစ်ကို ကိုယ်ပြန်စဉ်းစားမိတာက ငါလုပ်တာ တန်ဆောင်တိုင်မှာ မီးပုံးပျံလွှတ်တာနဲ့တောင် တူနေတယ်လို့။ စောင်စနှစ်ဖက်ကို ဆွဲပြီး မထားရတာလေ။
အရင်ဆုံး ကျနော့်ဘောင်းဘီ ကျယ်သီးပြုတ်သွားတယ်။ ကျနော်က ခါးပတ်ဝတ်မထားဘူး။ ဒီဘောင်းဘီက ကျနော့်ခါးနဲ့ ကွက်တိမို့ ဝတ်မလာခဲ့တာ။ အဲဒီတော့ ကျယ်သီးပြုတ်ပြီးတာနဲ့ သူမလက်က ဇစ်ကို ရောက်လာတယ်ဗျ။ အဲ .. ကျနော့်နားထဲမှာ ထစ် ထစ် ထစ် ဆိုတဲ့ အသံလေးတောင် ကြားရလား မသိဘူး။ စိတ်ကူးနဲ့ နားထဲမှာ ကြားယောင်တာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။ ဇစ်ကိုဆွဲချတာတော့ သိတယ်။ နောက်ပြီး သူမလက်က ကျနော့်ဘောင်းဘီစ နှစ်ဖက်ကို လာကိုင်တာလဲ သိတယ်ဗျ။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်လဲ အဆင်ပြေအောင် ဖင်ကြွပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ တစ်ဖက်သားကို ကူညီတတ်တာ မဟုတ်လား …။
ပထမဦးဆုံးသိတာကတော့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်ကောင်က လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖြစ်သွားတာပဲ။ အချုပ်ကျတဲ့လူတွေ လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာ ပြင်ပလေကို ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီး ရှူသွင်းသလိုမျိုး ကျနော့်ကောင်လဲ ဖြစ်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုလွတ်လပ်မှုက ခနပဲ ခံတယ်ဗျ။ နူးနူးညံ့ညံ့လေးဆိုပေမယ့် တင်းတင်းလေးနဲ့ ခါးလယ်ကနေ လာဖမ်းတာကို ခံရတယ်။ ထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်း ပြန်အဖမ်းခံရတယ်လို့ ဆိုလို့ရပေမယ့် ကျနော့်ကတော့ စိတ်မတိုပါဘူး။ ပျော်တောင် ပျော်နေသေးတယ်။ နောက်ပြီး လာပြီး ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ဟာက ငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးဗျ။ တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့ လူကို ငြိမ်ငြိမ်လေး မနေနိုင်အောင်ကို လုပ်နေတယ်။ ကျနော့်ဖြင့် ကိုရီးယားစောင်စနှစ်ဖက်ကို တင်းတင်းကြီး ဆုပ်ထားရတယ်။ ငါ့နှယ်နော်။ ဆော့်ဖ်ကိုးကားတွေမှာ မင်းသမီးလုပ်တဲ့လူ ဖီးလ်လာတာကို ပြချင်တော့ ဒါရိုက်တာက အိပ်ယာခင်းစကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် လိမ်ပြီး ကိုင်ထားခိုင်းတယ်။ အဲဒီ ဒါရိုက်တာများ ကျနော့်အဖြစ် တွေ့ရင် ဘာပြောမလဲ မသိဘူး …။
တော်တော်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားရတယ်ဗျာ။ ဘေးဘီမှာ လူတွေနဲ့ဆိုတာကိုနဲ့တင် စိတ်ထဲမှာ ကတုန်ကရင်ကြီး ဖြစ်နေတာ။ အမှန်က ဒါမျိုးကြုံဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်ကောင်မလေးနဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံ နောက်ဆုံးတန်းမှာ ထိုင်တုန်းကလဲ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ဖူးတာပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက ကိုယ်နဲ့ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးလေ။ အခုဟာက အခုမှတွေ့တဲ့ လူအချင်းချင်း။ နောက်ပြီး တော်ယုံတန်ယုံဆို ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိဘူးဆိုတဲ့ ဟိုင်းဝေးသွား အိတ်စပရက်စ် ကားကြီးပေါ်မှာဗျာ။ စဉ်းသာ စဉ်းစားကြီးတော့။
အဲဒီ အချိန်မှာပဲ လှုပ်ခါနေတဲ့ ကျနော့်ကောင်က ရပ်သွားတယ်။ အရှိန်ရနေတုန်း ကားဘရိတ်ေ ဆာင့်အုပ်လိုက်သလို ဖြစ်လို့ ကျနော်တောင် လူက ကြွတက်မလို ဖြစ်ရော။ ခံစားမှု အတိုင်းအတာက ဒီရေတက်သလို တက်နေပြီမို့ မနေနိုင်ဘူး။ ဘာများ ဖြစ်တာလဲ ဆိုပြီး ကျနော့် ဗိုက်နဲ့ကပ်နေတဲ့ စောင်စကို အသာဟ ကြည့်တယ်။
“အာ … မကြည့်နဲ့ …“
“ဆော … ဆောရီး …“
ကျနော် ချက်ချင်းပဲ စောင်ကို ပြန်ဖုန်းလိုက်ရတယ်။ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ကြည့်မိတာကို ရွှေမန်းသူလေး စိတ်မကောက်သွားပါစေနဲ့။ တောက် … ငါကလဲနော်။ ဒီလောက်တောင် ဖြစ်လာပြီးမှတော့ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ရိပ်မိသင့်တာပေါ့။ သူက ငါ့ကို ဒီအတိုင်းပစ်ထားပါ့မလား။ သူ မလုပ်ပေးချင်လျှင် ငါ ဇာတ်လမ်း ပြန်စတာတောင် လက်ခံပါ့မလား။ ဒီကောင်မလေး အတွေ့အကြုံမရှိပဲနဲ့ အခုမှ တွေ့တဲ့သူ တစ်ယောက်ကို ဒီလောက် လိုက်လျောပါ့မလား။ တော်တော်အသုံးမကျတဲ့ကောင်ပဲ။ စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်တင်ရင်း လှပ်ခနဲ မြင်လိုက်ရတဲ့ မျက်နှာလှလှလေးဟာ ဒီအချိန်ဆို ဘာနဲ့ နီးနေပြီဆိုတာကို စိတ်ကူးထဲမှာ မြင်ယောင်လာတယ်။ ကျနော်ထင်တာ ဟုတ်ပါစေ။
လည်ချောင်းထဲက အသံကို အပြင်ထွက်ကျမလာအောင် နှုတ်ခမ်းကို တင်းတင်းစေ့ထားရတယ်ဗျာ။ ဒီလောက် အဲယားကွန်းဖွင့်ထားတဲ့ ကားကြီးပေါ်မှာတောင် အဲဒီတစ်နေရာလေးက ကွက်ပြီး အေးခနဲ ဖြစ်သွားတဲ့ ခံစားမှုကို ချက်ချင်းသိတယ်။ အဲ .. အေးတယ်လို့လဲ အတိအကျတော့ ပြောလို့မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ခနကြာတော့ နွေးနွေးလေးလဲ ဖြစ်လာလို့ပေါ့။ ကျနော်ဗျာ။ မမြင်ရမှန်း သိရက်နဲ့ကို ဒီတစ်ခါတော့ စောင်ကြီး ကွယ်နေတဲ့ ကိုယ်ပေါင်ကြားကို ကိုယ်ပြန်ငုံ့ကြည့်နေမိတော့တာ။ တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ ကိုရီးယားစောင်ကို ကြည့်ပြီး အဲဒီစောင်စကို ဆွဲဖယ်ကြည့်ချင်တာများ ပြောကို မပြောပါနဲ့တော့။ စိုစိုစိစိပေမယ့် နွေးနွေးထွေးထွေး ဖြစ်နေတဲ့ အရသာကိုသာ အာရုံလွှဲရင်း စိတ်ထိန်းထားရတယ်။ နောက်ပြီး သူမှာထားခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို သတိရပြီး တစ်ချက်တစ်ချက် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျီးကန်းမျက်လုံးနဲ့ လှမ်းလှမ်းရှိုးရသေးတယ်။
ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခြေအနေသာမက အောင့်ထားခဲ့ရတဲ့ အချိန်ကာလ … ဒါတွေပေါင်းထည့်လိုက်တော့ ကျနော် သိပ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး။ လူက ဘယ်လိုမှ ငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်တော့ပဲ ဖင်တကြွကြွ ဖြစ်လာရော။ ဆန့်ထားတဲ့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ရှေ့ခုံက မှီရာနေရာကို နင်းကန်ထားမိတယ်ဗျ။ တော်သေးတယ်။ ရှေ့ကလူတွေက ကုလားသေ ကုလားမော အိပ်ပျော်နေကြလို့။ ဒီပြင်ဆို ကျနော်ကြောင့် သူတို့ခုံလှုပ်တာနဲ့ နိုးသွားနိုင်တယ်လေ။ တဖြေးဖြေး ပြီးဖို့ နီးသထက် နီးလာလေလေ ကျနော် ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်လို့ မရလေပဲဗျာ ..။
ရွှေမန်းသူလေးက ခေတော့ မခေဘူး … လည်တယ်ဗျ။ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကျနော့်ကောင်ရဲ့ အရင်းကို တင်းတင်းဆုပ်ထားတာဗျ။ ကောင်းကောင်းကြီး အတွေ့အကြုံ ရှိလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော် ဘယ်လိုပဲ ကော့ကော့ထိုးထိုး အထဲကို ဘယ်လိုမှ အဆုံးမဝင်ပါဘူး။ တစ်ဝက်လောက်ပဲ ဝင်နေတယ်ဆိုကြပါစို့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဝင်နေတဲ့ တစ်ဝက်လောက်ကတော့ ရေလည်ခံရတာနော်။ ဘယ်တုန်းကတည်းက အငြိုးနဲ့လဲတော့ မသိဘူး။ အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်မှုကို အလူးအလဲ ခံရတာ။ သူမပါးစပ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့ကို နှိပ်စက်တော့တာ။ နောက်ဆုံး ကျနော့်ကောင်လဲ ငိုပြီး မလုပ်ပါနဲ့တော့လို့ အသံထွက်ပြီး မပြောယုံတမယ် အရှုံးပေးလိုက်ရပါလေရော…။
ခင်ဗျားတို့လဲ ကြုံဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုဗျ။ ယပလက်ရောက်တုန်းက Dream World မှာ စီးဖူးတဲ့ ရိုလာကိုစတာ သွားသတိရတယ်။ အဲဒီဟာက အကြီးကြီးဗျ။ သိတယ်မှတ်လား။ ရိုလာကိုစတာ စီးတဲ့အခါ အမြင့်ဆုံးရောက်သွားရင် ပြုတ်ကျမယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် အဲဒီအချိန်ကိုပဲ ရင်တဖိုဖိုနဲ့ စောင့်နေကြတာလေ။ တကယ်တမ်း ပြုတ်လဲကျရော လေဟာနယ်ထဲမှာ တကိုယ်လုံး လွတ်ကျသွားသလိုမျိုး ခံစားရတယ် မှတ်လား။ အခုလဲ ဒီလိုပါပဲ။ နားထင်တွေ ပူထူတက်ပြီး လူတကိုယ်လုံးက လွတ်ထွက်သွားတာ။ နားထဲကတောင် တစစ်စစ်မြည်သွားလား မသိ။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျနော် ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ဘူး။ စောင်အောက်မှာ ခုံးထနေတဲ့ ရွှေမန်းသူလေးရဲ့ခေါင်းကို ဖိပြီးတော့ကို တင်းတင်းကြီး ကိုင်မိတာ …။
မျက်စိတမှိတ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်မှ ကြာတဲ့ အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါ ကျနော် မျက်စိမှိတ်ထားတာတော့ တော်တော်ကြာတယ်။ စိတ်ထဲမှာ သူမလေးကို အားနာပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာတော့ အတွေ့ရဲ့ကြီးစိုးထားမှုကို ကျနော် ဘယ်လိုမှ မတွန်းလှန်နိုင်ပါဘူး။ ယုတ်စွအဆုံး ခုနတုန်းကလို သူမများ ယောင်ယမ်းပြီး ကိုက်ပစ်လိုက်မှာလားဆိုတာ သွားတွေးမိပေမယ့် ရုန်းကန်ချင်သလို ဖြစ်နေတဲ့ သူမရဲ့ခေါင်းကို မလွှတ်မိဘူး။ ကျောတော့ နဲနဲချမ်းတာပေါ့လေ။ လေးကောင်ဂျင်မှာ ထိုးစရာ ပိုက်ဆံမပါတော့လို့ ကိုယ့်ဟာကိုကိုယ်ပေါင်ထိုးတာနဲ့တောင် တူနေပြီဗျာ …။
တအောင့်ကြာတော့ ကျနော့်ကောင်က ပကတိအတိုင်း အပြင်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ တော်သေးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရင်ထဲမှာ နှမျောသလို ဝမ်းနည်းသလိုလို ဖြစ်နေရောဗျာ။ စိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်နေလို့ ရွှေမန်းသူလေး ခေါင်းပြန်ထွက်လာတောင် သူမကို ကြောင်ပြီး ငေးကြည့်နေမိသေးတယ်။ လှပတဲ့ မျက်နှာရှေ့မှာ ဖယိုဖရဲ ခွေကာ ကျနေတဲ့ သူမဆံပင်လေးတွေကို လက်နဲ့ပြန်သပ်တင်နေတဲ့ ရွှေမန်းသူလေးကိုတော့ ကျနော် အစွဲလမ်းကြီး စွဲလမ်းမိသွားပြီ။ ကြည့်ပါဦး။ ၁၁၅မိုင်မှာ ကားရပ်တုန်းက ပြန်ဆိုးထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးလေးတွေ မရှိတော့ဘူး။ ပါးလွှာသေးငယ်တဲ့ ဒီနှုတ်ခမ်း ဖူးဖူးလေးက …ဒါ ဒါလေးက …
“အကို … အဆင်ပြေသွားပြီ မှတ်လား …“
ကျနော် ကြောင်ငေးနေလို့ ရွှေမန်းသူလေးကပဲ စကားစပြောတယ်။ သူမအကြည့်တွေမှာလဲ ကျနော်ရဲ့အခြေအနေတွေကို စူးစမ်းမှုတွေပါနေတယ်။
“ပြေ .. တယ် …. အရမ်း အဆင်ပြေတယ် … အကိုက ညီမကို အား … နာ …“
“တော်ပြီ .. အကို .. ကျွန်တော့်ကို ဆက်မပြောနဲ့တော့ … ကျွန်တော် အိပ်ချင်နေပြီ … အိပ်တော့မယ် … မနက်ဖြန်လဲ ကျွန်တော်အလုပ်ရှိသေးတယ်ဗျ..“
“အာ… ဆောရီးဗျာ …“
“အိပ်တော့မယ်ဗျာ… အကိုလဲ အိပ်တော့ …“
အဲဒါဟာ သူနဲ့ ကျနော်နဲ့ နောက်ဆုံးပြောဖြစ်တဲ့ စကားပါပဲ။ ရွှေမန်းသူလေးဟာ ကားမှန်ပြတင်းဘက်ကို ပြန်လှည့်သွားယုံမက မျက်စိပါမှိတ်ပြီး အိပ်သွားတာ။ ဒုံးတိကြီး စကားစဖြတ်သွားတာမှန်း သိပေမယ့် ကျနော် အတင်းကာရောတော့ စကားဆက်မနေတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်သာ ကူရှင်နောက်ကျောကို မှီရင်း နဲနဲလေး စောင်းအိပ်နေတဲ့ သူမကို ငေးကြည့်နေမိတယ်။ တော်တော်လေး ကြာတော့ စိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်လာမှာစိုးတာနဲ့ အိပ်ပျော်တာလား အိပ်မပျော်သေးတာလား မသိတဲ့ ရွှေမန်းသူလေးဘက်ကို မကြည့်တော့ပဲ ကားအမိုးကိုပဲ တခါမှ မမြင်ဖူးသလို စိုက်ကြည့်ပြီးတော့သာ နေလိုက်တော့တယ်။ စိတ်ထဲကတော့ ဘယ်လိုမှ ဆွဲထုတ်လို့မရတဲ့ အစောကအဖြစ်ကို အခုထက်ထိ မယုံကြည်နိုင်သလို ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ဒါ တကယ်များလား ….။
တနေဝင်ပြီးလျှင် တနေထွက်ရမယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ကလေးတောင်မှ သိတဲ့ လောကနိယာမတရား တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ကျနော့်မှာ ငယ်ငယ်တုန်းက ရန်ဖြစ်ရင် ကျိမ်းမောင်းနေကြ စကားအတိုင်း ဖြစ်ချင်နေမိတယ်။ နောက်တစ်နေ့ နေထွက်တာကို မမြင်ချင်သေးဘူး။
အတွေးတွေ ပလုံစီနေခဲ့တာမို့ ရွှေမန်းသူလေး အိပ်ပျော်သွားတာတောင် ကျနော် အိပ်မပျော်ခဲ့ပါဘူး။ လူကိုခပ်လျှောလျှောလေး နောက်မှီမှာထိုင်ရင်းသာ သက်သာသလို နေခဲ့တာပါ။ အပေါ်တည့်တည့်က လာနေတဲ့ အဲယားကွန်းလေတိုးသံကလွဲလို့ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်နေတဲ့ ကားကြီးထဲမှာ အိပ်မပျော်သူက ကျနော်ပဲ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် (ဒရိုင်ဘာနဲ့ ယဉ်နောက်လိုက် မပါ) အထီးကျန်ဆန်တယ်လို့တောင် ခံစားနေရသေးတယ်။ တစ်ချက်တစ်ချက် ခပ်ကြောင်ကြောင်အတွေးတွေနဲ့ အခုမှပဲ အချစ်ကို စတွေ့တာများလားဆိုပြီး ရွှေမန်းသူလေးကို ခိုးခိုးကြည့်မိသေးတာ။ ဒီလိုနဲ့ …
ကျနော် မှေးခနဲ တစ်ချက် အိပ်ပျော်သွားတယ်ထင်တယ်။ နားထဲမှာ လမ်းလျှောက်လာတဲ့အသံနဲ့ ကျိုးကျိုးကျွတ်ကျွတ်အသံကြားလို့ မျက်လုံးက ဖွင့်ကြည့်တော့ ယဉ်နောက်လိုက်ကောင်လေးက ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တစ်လုံးကိုင်ပြီး အနားရောက်နေတာ တွေ့တယ်။ လက်ထဲက စနိုးတာဝါထည့်ထားတဲ့ အထုပ်လေးကို လှမ်းပေးလို့ ခါးကိုအကျောဆန့်ပြီး ကျနော် လှမ်းယူလိုက်တယ်။ သတိရလို့ ဘေးကို ကြည့်လိုက်တော့ ရွှေမန်းသူလေးက မနိုးသေးဘူး။ အဲဒါနဲ့ စပါယ်ယာကောင်လေးပေးတဲ့ အထုပ်ကို တမင်တကာ ကျနော်ကပဲ ယူလိုက်ပြီး သူ့ရှေ့က အိတ်လေးထဲ ထိုးထည့်ပေးထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျနော် တစ်ချက် ဝေ့ကြည့်မိတယ်။ နိုင်ငံခြား western ကားတွေထဲမှာပါတဲ့ ကောင်းဘွိုင်တစ်ယောက် ဆလွန်းခန်းထဲဝင်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကြည့်တဲ့ အကြည့်မျိုးနဲ့။ ဘယ်နေရာက လူကတော့ အိုကေ၊ ဘယ်နေရာ လူကတော့ ငါ့လှုပ်ရှားမှုအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေ။
ကျနော် စိတ်ဓါတ်ကျစရာ ဖြစ်သွားတယ်။ ဘေးနားက အဒေါ်ကြီးက နိုးနေပြီဗျ။ သူကတောင် ကျနော့်ကို ပြန်ပြီး အကဲခတ်နေသေးတာ။ အကြည့်တွေက ဒီငနာလေး ဘာလုပ်မလို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လိုက်ရှိုးနေရတာလဲဆိုတာကို စူးစမ်းတဲ့အကြည့်ဗျ။ ကျနော် အရင်ရောက်ပြီးမှ ရွှေမန်းသူလေးက ကားပေါ်တက်လာတာကြောင့် ဒင်းက ကျနော်တို့ ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဆိုတာ သိနေတာနေမှာ။ ဟင်း .. အဒေါ်ကြီးတွေများ ခက်တော့တာပဲ။ အိပ်စရာ ရှိတာ အိပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ကိုယ်သူ အမျိုးသမီးရေးရာက ကျနေတာပဲ။ ကျနော်လဲ ငါတော့ ဘာမှလုပ်လို့ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိသွားပြီမို့ ထားလိုက်ပါတော့ ဆိုပြီး ဒီဘက်ပြန်လှည့်လိုက်တယ်။
“သြော် .. ညီမ နိုးနေပြီလား …“
ရွှေမန်းသူလေးက ကျနော့်ကို မှေးမှေးလေး ကြည့်နေတယ်။ ကျနော့် အမေးကို အဖြေမပေးသေးပဲနဲ့ မျက်လုံးနဲ့တင် ပြုံးပြနေရှာတယ်။ ကျနော်ကတော့ သူမလို မျက်လုံးနဲ့တင် မပြုံးတတ်လို့ ပါးစပ်နဲ့ပါ ပြုံးရင်း ရှေ့မှာ ထည့်ထားတဲ့ စနိုးတာဝါကို လက်ညိုးထိုးပြလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကနွဲ့ကလျလေးလို ဖြစ်နေတဲ့ သူမကို တမင်တကာကို ဆွေးဆွေးလေး ဖြစ်နေတဲ့ အကြည့်နဲ့ကြည့်တာ။ အကယ်ဒမီ ရချင်တောင် ရနိုင်တဲ့ အမူအယာမျိုးနဲ့ပေါ့လေ။
ကျနော့်ရဲ့အကြည့်တွေကို ရွှေမန်းသူလေးက ရှောင်ဖယ်မသွားဘူးဗျ။ တန်ပြန်ပြီး စိုက်ကြည့်ရင်း တအောင့်လောက်ကြာမှ ..
“မျက်နှာသစ်ဖို့ ရပ်ဦးမှာလား … အကိုသိလား ..“
“အဲ .. မသိဘူးဗျ … အကိုက ရန်ကုန် မန္တလေး သိပ်မသွားဖူးဘူး …ခါတိုင်းရပ်တယ်မှတ်လား …“
ကျနော့် စကားလဲ ဆုံးရော ရွှေမန်းသူလေးက ကိုယ်ကိုဆန့်ပြီး အပြင်ကို လှမ်းကြည့်တယ်ဗျ။ ကျနော်လဲ အဲဒီတော့မှ သူမကြည့်သလို အပြင်ကို လိုက်ကြည့်မိတာ။ အစောတုန်းကတော့ ဒီလောက်အချိုးကျပြီး ချောလှတဲ့ မန်းလေးသူနဲ့ ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းဆက်ရင် ကောင်းမလားဆိုတာကို တွေးရင်း သူ့ကိုယ်ပဲ ကြည့်နေမိတာကိုး။
“ရောက်တော့မှာပဲ … အိမ်တွေတောင် မြင်နေရပြီ ..“
ဟုတ်သားပဲဗျ။ လမ်းဘေးမှာ လယ်ကွင်းတွေ မရှိတော့ဘူး။ အိမ်တွေကို မြင်နေရပြီ။ မန္တလေးမြို့ထဲ ဝင်လာပြီ ထင်တယ်။ ကျနော် အဲဒီတော့မှ ဖုန်းကိုထုတ်ပြီး ကမန်းကတမ်း အချိန်ကို ကြည့်မိတယ်။ ၅း၃၀ ..
“ရောက်တော့မှာလား … မျက်နှာသစ်ဖို့ မရပ်တော့ဘူးလား ..“
ကျနော် အူကြောင်ကြောင်နဲ့ သူမ မေးတဲ့ စကားကိုပဲ ပြန်မေးမိတယ်။ ရွှေမန်းသူလေးက ကျနော့်ကို စကားနဲ့ မဖြေတော့ဘူး။ ခေါင်းသာ ခါပြတယ်။ မရပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘော။ ဘယ်လိုလေးလဲဟ .. စကားနဲ့တောင် မဖြေချင်တော့ဘူးလားဟ။ ငါ့ကိုများ ဟိုညမွှေးပန်းသီချင်းထဲကလို ညတုန်းက တွေ့ခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆိုပြီး ထားသွားမှာလား။
“ညီမ … ဒီလောက်တောင် ခင်မင်ပြီးတော့မှတော့ .. နာမည်လေး အပန်းမကြီးရင် ပြောပြပါလား …“
“အ ဟင်း .. ဟင်း .. ဘာလဲ … ခင်ဗျားက နာမည်အရင်မေးမယ် .. ပြီးရင် ဖုန်းနံပါတ်မေးမယ် .. နောက်တော့ အိမ်လာလည်မယ် အဲဒီလို ကြံထားတာလား ..“
ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ဖြေတဲ့ အဖြေမို့ ကျနော် ပြန်ပြောရ တော်တော်ကျပ်သွားတယ်။ သောက်ဂွပဲ။ စိတ်ရောမှန်ရဲ့လား မသိဘူး။ နင်နဲ့ ငါနဲ့ ညတုန်းက ဟိုဒင်းဟိုဟာဖြစ်တဲ့ အထိတောင် ရင်းနှီးခဲ့ကြတာလေ။ မှတ်ကောမှတ်မိသေးရဲ့လား။ ကျနော်လဲ အလျှော့မပေးချင်သေးတာနဲ့ ..
“ညီမနဲ့ အကိုနဲ့ ဆုံတဲ့ အဖြစ်က ဆန်းကျယ်လို့ပါ … အကို့ဘဝမှာ မေ့ဖျောက်လို့ မရနိုင်တဲ့ ရင်ခုန်မှုတစ်ခုပဲ ညီမ ..“
“မေ့လို့မရလဲ .. ကြိုးစားပြီသာ မေ့ဗျာ… ကျွန်တော်ကတော့ ဒီကားပေါ်က ဆင်းတာနဲ့ အကို့ကို မေ့လိုက်မှာ … မမေ့လို့ မဖြစ်ဘူး .. လာကြိုမှာက ကျွန်တော့်ဘဲက လာကြိုမှာ …ဒါဆို ခင်ဗျား သဘောပေါက်တော့ ..“
ဟမ် … ဘယ်လိုကြီးလဲ။ ကျနော် တော်တော်အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်သွားသလို ဘာဆက်ပြောရမယ်မှန်းလဲ မသိတော့ဘူး။ တော်တော်တော့ နားလည်ရခက်တဲ့ ကိစ္စပဲဗျာ။ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ ဘာမှလုပ်လို့ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ နာမည်လေးတောင် မပြောချင်တော့ဘူးဆိုမှတော့ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဗျာ။ နောက်ပြီး ဘဲဘဲက လာကြိုမှာတဲ့။ ဟူး …
အတွေးကိုယ်စီနဲ့ ငြိမ်သက်သွားလို့ ရွှေမန္တလာကားကြီးက ကျွဲဆန်ကည်ကားဝင်းသွားတဲ့ လမ်းထဲ ချိုးကွေ့သွားတာတောင် သတိမထားမိလိုက်ဘူး။ ကားပေါ်ကလူတွေ ထိုင်ခုံတွေကို ပြန်မတ်ပြီး မတ်တပ်ထပြီး လုံချည်ပြင်ဝတ်သူကဝတ်၊ အပေါ်စင်ပေါ်ကနေ အထုပ်ဆွဲတဲ့သူကဆွဲ ဆိုတော့မှ ကျနော် သိတာ။ မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ ကျနော်လဲ စောင်ကို ပြန်ခေါက်လိုက်တယ်။ အဲဒီ စောင်အခေါက်မှာတော့ ရွှေမန်းသူလေးက အပြင်ကို ငေးနေရာက တစ်ချက် ကျနော့်ကို စောင်းငဲ့ကြည့်တယ်။ ကျနော် တစ်ခုခုပြောမယ်လို့ ပြင်လိုက်တုန်းရှိသေး သူမက ပြတင်းပေါက်မှန်ဘက်ပဲ ပြန်လှည့်သွားတယ်ဗျာ။ …
ကားပေါ်ကနေ တော်တော်ကို တိုးဝှေ့ဆင်းလိုက်ရတာပဲ။ သုံးဘီးယူမလား ဆိုက်ကယ်ယူမလား ဆိုတဲ့ တရစပ်ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ မြားတံလို အသံတွေကို လက်ကာ၊ ခေါင်းခါ ၊ အထုပ်ပိုက်ရင်း အဖေနဲ့ အမေရှေ့က တံတိုင်းသဖွယ် လျှောက်လာခဲ့ရတယ်။ တော်သေးတယ်။ ဝိုင်းအုံနေတဲ့ လူအုပ်ကို ကျော်လိုက်လျှင်ပဲ ကျနော်တို့ကို လာကြိုနေတဲ့သူတွေကို တွေ့တယ်ဗျ။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျနော့်နောက်က လိုက်လာတဲ့ အမေနဲ့ အဖေက ရှေ့ကိုရောက်သွားပြီး ကျနော်က အလိုလို နောက်ရောက်သွားတယ်။ ကျနော်လဲ အခုကျတော့မှ ကားပေါ်က ဆင်းခါနီးမှာ “အကို သွားတော့မယ်နော်“ ဆိုပြီး တစ်ခွန်းတည်း နှုတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့ ရွှေမန်းသူလေးကို ပြန်လှည့်ရှာနေမိတယ်။ သူမပြောသလို ဘဲဘဲဆိုတဲ့ အကောင်က လာကြိုနေသလားလို့လေ။
“အကို … ဘာတွေ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်နေတာလဲ … ပစ္စည်းကျန်ခဲ့လို့လား ..“
ကျနော့် ပုခုံးကို လာပုတ်သံနဲ့အတူ ဘေးနားရောက်လာတာကတော့ အမေ့အသိ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ရဲ့သားငယ် ကျော်ကျော်ပါ။ ကျနော်အောက် ခြောက်နှစ်လောက်ငယ်ပေမယ့် ပေါင်းလို့ကောင်းလို့ ကျနော်နဲ့ ဘော်ဒါဖြစ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။
“ဘာမှ မကျန်ပါဘူးကွာ .. အသိတစ်ယောက်များ တွေ့လိုက်သလားလို့ …“
“ဘာလဲ … လာကြိုတဲ့သူတွေထဲကလား …“
“အကို အသိဆိုတာ .. ဟိုတစ်ယောက်လား … ဒီဘက်ကို ကြည့်နေတာဗျ … အမိတော့ အမိစားလေးပဲ …ဟီး ဟီး ..“
ကျနော်နဲ့ ၃၅လမ်းက စားသောက်ဆိုင်မှာထိုင်လျှင် မန္တလေးက တရုတ်မလေးတွေ စကတ်က ဘယ်လောက်အတိုအထိ ဝတ်လေ့ရှိကြောင်း၊ အဲဒီလိုအတိုလေး ဝတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်ကို ခွစီးလေ့ရှိကြောင်း ပြောနေသူမို့ သကောင့်သားက ဇမသေးဘူးဗျ။ သူပြတဲ့ နေရာကို ကြည့်လိုက်တော့ ရွှေမန္တလာကားဂိတ် အစွန်မှာ ရပ်နေတဲ့ ရွှေမန်းသူလေးကို တွေ့တယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ကို ကြည့်နေတယ်ဗျ။ ကျနော်ရှိနေတဲ့ နေရာကဆိုရင် နဲနဲလှမ်းတယ်လို့ ဆိုရပေမယ့် ကျနော့်စိတ်ထဲ သူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေကို အနီးကပ်မြင်လိုက်ရသလိုပဲ။ ရင်ထဲမှာ အမည်မဖော်နိုင်တဲ့ ခံစားမှုတစ်ခု ချက်ချင်းကို ဖြစ်လာတယ်ဗျာ။
“သွားကြမယ်လေ … ကျော်ကျော် … မင်းတို့က ဘာလုပ်နေကြတာလဲ …“
ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ကိုယ်တိုင်က လှမ်းခေါ်လို့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်သား ရပ်ထားတဲ့ လိုက်အော့စ်ကားလေးနား ပြေးလာခဲ့ရတယ်။ ကျော်ကျော်က ကားမောင်းသူနေရာ ဝင်လိုက်ချိန်မှာ အဖေက “မင်းတို့ ညီအကို ခေါင်းခန်းမှာပဲ ထိုင်ကွာ“ ဆိုပြီး ပြောလိုက်လို့ ကျနော် ကျော်ကျော့်ဘေးမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ ကျနော်တို့ကားလေးဟာ ကျွဲဆည်ကန်ထဲကနေ တဘီးချင်း လှိမ့်ရင်း ထွက်လာခဲ့မိကြတယ်။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာတော့ သူမပြောတဲ့ လာကြိုမယ့်သူဆိုတာ ဘာဖြစ်လို့များ ရှိမနေတာလဲဆိုတဲ့ အတွေးတစ်ခုက အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့ အထိကို ကြီးစိုးထားခဲ့တာပါပဲဗျာ ….
အဲ … ပြောရဦးမယ် … မန်းလေးကနေ ရန်ကုန်ပြန်တော့လေ … ကျနော် ဘာဆုတောင်းမိတယ်ထင်လဲ။ ခင်ဗျားတို့ သိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆုတောင်းတိုင်းတာ ပြည့်ရမယ်ဆိုလျှင်လဲ လူတွေအားလုံး သိန်းထီပေါက်ကုန်ကြမှာ မှတ်လား။ ဒီတခါတော့ ကျနော့်ဘေးလာကျတာ အိတ်ထဲပါလာတဲ့ ကွမ်းထုပ်ကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုယူစား၊ ပြီးတော့ ငါးမိနစ်တစ်ခါ ရှေ့မှာချိတ်ထားတဲ့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်သေးသေးလေးထဲကို ကွမ်းတံတွေးထထွေးတတ်တဲ့ မုံရွာက ကျောင်းဆရာဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဗျာ …။ လမ်းတလျှောက်လုံးလဲ ကျနော့်ကို မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီး စကားပြောလာတာ လေကန်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ ကျနော်တောင် လက်မြှောက်အရှုံးပေးရမယ်။ နောက်ဆုံး ကျနော် စာတမ်းလေးတစ်စောင် ရေးစရာ ရှိလို့နော် ဆိုပြီး အတင်းစကားစဖျက်ပြီး ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ဖွင့်ပြီး စာရေးနေလိုက်ရတယ်။ ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကဗျာလိုလို စာလိုလိုဟာလေး ရေးမိတာပါ။ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာ ….
ကျနော့် ချစ်သူ အတွင်းရေးမှူး မမ